“အမျိုးသားများအတွက် အူကျရောဂါပျောက်သော ဆေးနည်း”
“အမျိုးသားများအတွက် အူကျရောဂါပျောက်သော ဆေးနည်း” ဆေးနည်းမှာ------ ရွှေဖရုံသီး၏ အညှာကို နေလှန်းပြီး အညှာအခြောက်နှင့် ဆန်ဆေးရည် သေ...
How to check authentic or fake 501 Jean
How To Spot A Fake Pair Of Vintage Levi's Jeans Often spottingafake can be harder than it seems, but if you're equipped with so...
လက်ရှိရွှေလူငယ်လေးတွေ တော်တော်မျာများကို ဒီစကောလာရှစ်လေးတွေ ရထားတာကိုတွေ့ဖူးတယ်.... ဒီအသိထဲက ရွှေလူငယ်တွေဆိုရင် အမေရိကန် စကောလာပါထပ်ရထားသေ...
Weight လျှော့ချင်တဲ့ မော်ဒယ်လေးလိုလှချင်တဲ့ ရွှေမမသူငယ်ချင်းတို့... သိပ္ပံနည်းကျအဖြစ်ဆုံး၊ အမှန်ကန်ဆုံးဝိတ်လျှော့နည်းဟာ Input အဖြစ်ဝ...
UB103 ရန်ကုန်- မန္တလေး- ရန်ကုန် ခရီးစဉ်ကို UB 103 MNA Embraer 190AR နဟမန္တလေးတံတားဦးလေဆိပ်ဆင်းစဉ် Nose Landing Gear ရှေ့ဘီးချမရ
ယနေ့ ၁၂/၀၅/၂၀၁၉ ရက်နေ့ ၀၇၁၅နာရီတွင်မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်း ၏ခရီးစဉ်အမှတ် UB103 ရန်ကုန်- မန္တလေး- ရန်ကုန် ခရီးစဉ်ကို လေယာဉ်အမှတ် XY-AGQ , Embraer 190AR နှင့် ခရီးသည် ၈၂ ဦးတင်ဆောင်၍Captain မြတ်မိုးအောင်၊ FO ကောင်းဆက်လင်း၊ FOမျိုး သီဟအောင်၊ cabin crew များအဖြစ် မချယ်ရီမြင့်၊ မကေဂျာဆန်အောငိ၊မခိုင်ဇာလင်း၊မဥမ္မာအောင် တို့ မောင်းနှင် ပျံ သန်းရာ မန္တလေး လေဆိပ်သို့ ဆင်းချိန် ၀၈၁၇ ချိန် တွင် လေယာဉ်ဘီးချရာ Nose Landing Gear မကျ ကြောင်း တွေ့ရှိရသဖြင့် Captain မှ Emergency procedure အရ ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း Nose Landing Gear သည် ကျမလာပါ။ ထို့အတွက် Captain မှ လေကြောင်းထိန်းမျှော်စင်သို့ Nose Landing Gear ကျမကျ ကြည့်ပေးပါရန် ၂ ကြိမ်ဝဲပတ်ပျံသန်းပြခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် လေယာဉ်ဆီကုန်စေရန် ဝဲပတ်ပျံသန်းပြီးနောက် ၀၉၀၉ နာရီ တွင် Runway 17 အတိုင်း Emergency landing ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ပြေးလမ်း ၄၅၀၀ ပေ
လေယာဉ်ဦးစိုက်အနေအထားနှင့်ရပ်တန့်ပြီးနောက် လေယာဉ်Cabin Crew အဖွဲ့မှ ခရီးသည်များအား Emergency Evacuations Proceduresအတိုင်း သတ်မှတ်ချိန်အတွင်းပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
ခရီးသည်၊ လေယာဉ်အဖွဲ့သားများ တစ်စုံတစ်ရာ ထိခိုက်ခဲ့ခြင်းမရှိပါ။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်တွင် ပါဝင်ခဲ့သော ခရီးသည်များကို လည်း ERP( Emergency Response Plan) နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။
မြန်မာအမျိူးသားလေကြောင်းလိုင်းအနေဖြင့် တင်ပြပါဖြစ်စဉ်တွင် လေယာဉ်အဖွဲ့သားများ နှင့် ညီညွတ်စွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့သော ခရီးသည်များအားလည်းကောင်း၊ လေယာဉ်အရေးပေါ် အခြေအနေ ၌ ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်စွာ နှင့် ဘေးကင်းစွာ မောင်းနှင်ပေးခဲ့သော Captain မြတ်မိုးအောင်၊
FO ကောင်းဆက်လင်း၊ FOမျိုး သီဟအောင်၊ တို့အားလည်းကောင်း၊ cabin crew များအဖြစ်မချယ်ရီမြင့်၊
မကေဂျာဆန်အောင်၊ မခိုင်ဇာလင်း၊မဥမ္မာအောင်တို့အား လည်းကောင်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း နှင့် ချီးကျူးမှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြု အပ်ပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
On 12/05/2019; 0715AM, UB103 RGN-MDL, Embraer 190 XYAGQ, flew by Captain Myat Moe Aung, FO Myo Thiha Aung, FO Kaung Set Lwin, Purser Cherry Myint and3cabin crew.
Captain made RNAV approach RW17 to MDL. But Nose landing gear disagreed when landing gear down on EICAS message. Captain did emergency landing gear down procedure but still happened. He did two flight path in front of ATC to check nose landing gear down or not.
Then Captain followed emergency procedures and did the fuel burn out to reduce the landing weight. At 0909AM, he made the safe landing with no casualties and no injuries on board. Also all cabin crew did the proper emergency evacuations to all.
Myanmar National Airlines would like to appreciate highly and thanksalots to all on board passengers and our crews.
We like to keep all UB flight in higher safety standards.
Posted by Ko Nge at Sunday, May 12, 2019 No comments:
April 2019 မှာ IMF ကထုတ်ပြန် တဲ့မြန်မာ့ စီးပွားရေး သုံးသပ်ချက်-လက်ရှိမှာ စီးပွားရေးကျဆင်းနေကြောင်း
April 2019 မှာ IMF ကထုတ်ပြန် တဲ့မြန်မာ့ စီးပွားရေး သုံးသပ်ချက် အပြည့်အစုံမှအချို့စာမျက်နှာများကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
နှစ်လတ်နဲ့နှစ်ရှည်မှာ မြန်မာ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုမြင့်မား ဖွယ်အခြေအနေရှိပေမဲ့ လက်ရှိမှာ စီးပွားရေးကျဆင်းနေကြောင်း ရေးသားဖော်ပြထားတဲ့ထိုသုံးသပ်ချက် အစီ ရင် ခံစာမှာ IMF ကမီးမောင်းထိုးပြတဲ့မြန်မာ့အဓိက စီးပွား ရေးပြဿနာများနဲ့ ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်ရန်အကြံပြုချက် များဟာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။
IMF ရှုမြင်တဲ့အဓိကပြဿနာများအနက် ရခိုင်အရေးမှ အပ စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေအပေါ် တင်ပြ ရာမှာ ဘဏ်လုပ်ငန်း stability risks ကို အတော်အလေး ပေးဖော်ပြတာတွေ့ရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်က ဘဏ်များလိုက်နာရန် regulations ၄ ခုထုတ်ပြန်ခဲ့ရာမှ ပြည်တွင်းဘဏ်တွေရဲ့ ချေးငွေနဲ့ profitability ထိခိုက်ကျဆင်းကြောင်း တိုင်းပြည်စီးပွားရေးပါနှေးကွေးကြောင်း ပြည်တွင်းဘဏ် တွေအနေနဲ့ non-performing loans ပြဿနာကို ရင် ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်ပြီး ၄င်းတို့မတည်ငွေရင်းခိုင်မာစွာတိုးမြှင့် ရန် အခက်အခဲများပိုရင်ဆိုင်နေရကြောင်း နိုင်ငံခြားဘဏ် များက exporters သို့ချေးငွေထုတ်ချေးခြင်းကြောင့် ပြည်တွင်းဘဏ်များကထုတ်ချေးငွေကျဆင်းခြင်းကို ဆည်မိနိုင်ခဲ့ကြောင်း သို့သော် ပြည်တွင်းဘဏ်များ ခိုင်မာရေးပြဿနာဟာ ဘဏ်စနစ်တစ်ရပ်လုံးရဲ့ တည်ငြိမ် မှုကိုထိခိုက်စေမယ့် စိန်ခေါ်မှုဖြစ်မလာစေရန် သတိပြု ရမှာဖြစ်ကြောင်း financial stability နဲ့ financial deepening အတွက် ဦးတည်ဆောင်ရွက်သင့်ပြီး exchange rate ကို market-determined rate ဖြစ်စေရန်တက်လက်ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း ၂၀၁၈ တွင် usd ဖြင့်လဲလှယ်ရာ၌ ကျပ်ငွေတန်ဖိုး 14% ကျော်ကျ ဆင်းခဲ့ကာ ပြည်တွင်း inflation မှာ 5% ခန့်မှ 8% ကျော်သို့မြင့်တက်လာကြောင်း အတိုးနှုန်းကို ဖြေ လျှော့ ပေးသင့်ကြောင်း အစိုးရဘတ်ဂျက်လိုငွေကို ဗဟို ဘဏ် ထံမှချေးငွေဖြင့်ဖြည့်ဆည်းခြင်းကို ဆက်လက်မလုပ် ဆောင်သင့်ကြောင်း သဘာဝဓါတ်ငွေ့မှဝင်ငွေကျဆင်း၍ အစိုးရရငွေ ကျဆင်းနေသည်ကိုတွေ့ရပြီး အစိုးရဘတ် ဂျက်လိုငွေအချိုး ပြန်မြင့်တက်လာရာ public finance management ပိုမိုဂရုတစိုက်ဆောင်ရွက်ရန်လိုကြောင်း second wave reforms နဲ့ capacity development မြှင့်တင်လုပ်ဆောင်ရနါအရေးကြီးကြောင်း စသည်ဖြင့် IMF Staff Report တွင်ဖော်ပြသည်ကိုတွေ့ရပါတယ်။
သုံးသပ်ချက်တွေစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ် ဒါပေမဲ့ ဗဟိုဘဏ်က ဘဏ်များခိုင်မာမှုကောင်းစေရန်အတွက် ဟုဆိုကာ regulations ၄ ခုထုတ်ပြန်စဉ်က IMF Technical Assistance ရယူဆောင်ရွက်တယ်လို့ လည်းဆိုထားပြီး ယခု staff report မှာ IMF က ထို regulations များကို ဗဟိုဘဏ်မှထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး နောက် ဘဏ်တွေအားနည်းလာခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့အတွက် ဒီပြဿနာအပေါ် IMF ရဲ့ ထိုအမြင် ၂ ရပ်ဟာ မရှင်းဘူး လို့ခံစားမိပါတယ်။
တဖန် financial stability and deepening အတွက် လုပ်ပါလို့ IMF ကပြောပြန်ပါတယ်။
မှန်ပါတယါ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုအတွက်တော့ financial stability and deepening ဟာ essentials ပါ but it is easier said than done -given the constaints in the financial system how shall we build these two essentials?
ဘယ်ကစမလဲ reforms ကစရပါမယ် ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးစနစ်ပုံစံကို ဈေးကွက်စနစ်သို့ပြောင်းဖို့ထိုစနစ် နဲ့ လိုက်လျောညီထွေပြီး နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးလိုအင်အ တွက် မှန်ကန်တဲ့ စီးပွားရေးဥပဒေသကို ဦးစွာခင်းကျင်း ရပါတယ် ဒါကြောင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာဥပဒေတွေပြင် ဆင်ပြဌာန်းရာမှာ ဘဏ်ဥပဒေတွေပါပြုပြင်ပြီး ဘဏ် စနစ်ကိုလည်းပြုပြင်တည်ဆောက်လျက်ရှိပါတယ် ဒါပေမဲ့ တည်ဆဲ Financial Institutions Law ဟာ အမှားတွေ အားနည်းချက်တွေများနေပြီး financial reforms ကို အကောင်အထည်ဖော်ရာမှာ အထောက် အကူကောင်းမရ နိုင်ပါ financial stability အတွက် ငွေကြေးဈေးကွက်မှာ ဗဟိုဘဏ်လုပ်ဆောင်ရမယ့် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကို ထိရောက်စွာဖော်ဆောင်ရန် အဆိုပါဥပဒေရဲ့ပေးထားချက်ဟာ အလွဲကြီးဖြစိနေ ပါ တယ် ဒါကိုပြင်ရပါမယ် တခါ financial deepening ဆိုတဲ့အချက်ဟာလည်း ငွေရေးကြေးရေးစနစ် ခိုင်မာ အားကောင်းစေရန် မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စ့ ဖြစ် ပါတယ် ယခုလက်ရှိ အထက်ပါဥပဒေမှာ financial deepening အတွက် ဆောင်ရွက်ရန်ပေးထားချက် များ ဟာ အမှားတွေ မရှင်းမလင်းဖော်ပြချက်တွေ မပြည့် စုံတာတွေနဲ့ မို့ ဒီဥပဒေနဲ့ခရီးဆက်လို့ကတော့ stability ရော deepening ရော အဝေးကြီးမှာသာရှိနေပါလိမ့်မယ် ဒီ Law ဟာ professionally prescibed လုပ်ထားတာ မဟုတ်ပါဘူး ဒါကို ကျမအား တရားဝင်ဖိတ်ကြား အကြံ ဥာဏ်တောင်းတဲ့အစည်းမဝေးတွေမှာတင်ပြခဲ့ပေမဲ့ မပြင်ခဲ့ကြပါ ဥပဒေကစလွဲမှတာ့ ဘဏ်လုပ်ငန်းမူဝါဒ တို့ regulations တို့ အားနည်းပါတော့တယ်။
ဘဏ်နဲ့ငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းဟာ တိုင်းပြည်စီးပွား ရေးမှာ မဏ္ဍိုင်သဖွယ် အရေးပါတာဖြစ်လို့ ဒါတွေလွဲလို့ ကတော့ ကျန်တာလည်းမအောင်မြင်နိုင်ပါ။
exchange rate regime ကို ၂၀၁၂ မှစပြီး reform လုပ်စဉ်ကတည်းက လုပ်ရမယ့် process တွေရှိပြီးသား စတင်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ government team တွေပြောင်းသွားပြီးနောက် reform process lost its steam ၄င်းနောက် ကချွတ်ကချော်တွေဖြစ်ခဲ့ကာ exchange rate distorted ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် usd strong ဖြစ်လို့ ကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျပါတယ် ရယ်လို့ ဆိုနိုင်ပေမဲ့ တခြား currency တွေထက်ပိုပြီး ကျပ်ငွေတန်ဖိုးကကျခဲ့ပါတယ် exchange rate reform လုပ်သလို interest rate reform လည်း လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ IMF ကပြောတာမှန်ပါတယ် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ ဈေးနှုန်းတွေတက်ကျပြောက်းလဲတာ ဟာ ကုန်စည်ဈေးနှုန်းကိုအဓိကရည်ညွှန်းကြပေမဲ့ ငွေလဲနှုန်း(ငွေကြေးရောင်းဝယ်ဈေးနှုန်း) အတိုးနှုန်း (ချေးငွေ ရဲ့ဈေးနှုန်း) လုပ်ခလစာ(လုပ်အားဈေးနှုန်း) မြေ အိမ်ရာဈေးနှုန်း( Asset prices) တို့ဟာ အပြန်အလှန်ဆက်နွယ်နိုင်တဲ့ ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်ပါတယ် အိမ်ရာဈေးကွက်ကျဆင်းရင် တိုင်းပြည်စီးပွားရေးကို ပါထိခိုက်တဲ့နိုင်ငံတွေများစွာတွေ့ရပါတယ် စီးပွားရေး ထိခိုက်ရင် အတိုးနှုန်း ငွေလဲနှုန်း လုပ်ခလစာနဲ့ ကုန် ဈေးနှုန်းတို့ကိုပ့ထိခိုက်နိုင်ပါတယ် ဒါကြောင့် ဈေးနှုန်း များတည်ငြိမ်ပြီး စီးပွားရေးတိုးတက်အောင် မေခရိုစီး ပွားရေးစီမံခန့်ခွဲရာမှာ ဘဏ္ဍာရေးမူဝါဒ ငွေကြေး မူဝါဒနဲ့ စီးပွားရေးမူဝါဒတို့အားလုံး အပြန်အလှန် ပေါင်း စပ် ညှိန်ှုင်းမှုဟာ အရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ် မူဝါဒတွေဟာ logical and realistic ဖြစ်ဖို့လိုသလို လုပ်သင့်တဲ့ချိန် (right timing) ဖြစ်ဖို့နဲ့ မူဝါဒ အရည်အသွေးကောင်းဖို့ လည်းအထူးလိုအပ်ပါတယ်
fiscal policy front မှာ အစိုးရအသုံးစရိတ်နဲ့ တိုင်းပြည် စီးပွားရေးကို stimulate လုပ်ရမယ့်အချိန်မှာ austerity ပုံစံနဲ့သွားရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပေါ်တာ နိုင်ငံရဲ့ ပကတိ အခြေအနေများအရ အစိုးရဘတ်ဂျက်အသုံးစရိတ်ကို ယာယီသာ ထိန်းနိုင်ပြီးရငွေပိုင်းက အသုံးစရိတ် တိုးတက် နှုန်းကို အလျင်မမီနိုင်တာ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံရဲ့သဘာဝပါပဲ ဝင်ငွေတိုးတက်ရရှိဖို့က financial system ကို ဈေးကွက်စနစ်ပုံစံအတိုင်းမတည်ဆောက်ဘဲ မဖြစ်နိုင်ပါ ဒါကြောင့် IMF က second wave reform သွားခိုင်း တာဖြစ်ပါတယ် development financial institutions တွေနဲ့ capital market တို့မရှိရင် ဒီလိုပဲ limited fiscal space နဲ့ အခက်အခဲတွေထဲမှ ရုန်းထွက် ရခက်နေဦးမှာပါ ဒီနေရာမှာလည်း အထက်မှာပြောခဲ့တဲ့ ဥပဒေဟာ အတားအဆီးဖြစ်စေတာတွေများစွာ ရှိနေ ပါတယ်။
ဒါတွေအရင်ပြင်ရပါမယ် အဲ့ဒီလိုပြုပြင်ပြီးနောက် financial stability နဲ့ deepening ကို အစဉ်တစိုက် တည်ဆောက်မယ့် mechanism တွေ institutions တွေ နဲ့ financial system ရော economy ရော sustainable development ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါတွေမပြင်ဘဲဆက်သွားရင် ဘာ Master Plan တွေလုပ်လုပ် အချီးနှီးသာဖြစ်ပါမယ်လို့ တင်ပြလိုက်ပါ တယ်။
2018 ARTICLE IV CONSULTATION—MYANMAR by Let's Save Myanmar on Scribd
Myanmar Investment Fund တစ်ခုသတင်းကို မနေ့က fb မှာကျမတင်ပေးခဲ့ပါတယ် သတိပြုဆင်ခြင် စရာ ငွေကြေးမူဝါဒဆိုင် ရာပြည်ပသတင်းအချို့ ကို လည်း တင်ပေးခဲ့ပါတယ်
ထိုသတင်းများနဲ့ဆက်စပ်စဉ်းစားသင့်တာတွေအကျဉ်းမျှ မျှဝေလိုတဲ့အတွက် ဒီစာကိုရေးလိုက်ပါတယ်
မြန်မာဈေးကွက်ကတော့ ဒီလို ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အ စည်းမျိုးရဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ထဲထဲဝင်ဝင် အကျွမ်းတဝင်ရှိ ဖို့အချိန်ယူရပါဦး မယ် အဲဒီ gap ကျဉ်းလာပြီး financial market ဖွံ့ဖြိုးအောင်ဦးစွာအပတ်တကုတ် လုပ်ရမှာပါ မြန်မာ့ငွေရေး ကြေးရေးစနစ်ဟာ ကမ္ဘာမှာ/အာဆီယံ ၅ နိုင်ငံမှာ အများလက်ခံကျင့်သုံးတဲ့ စနစ် များ ကဲ့သို့ပုံစံတကျ လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ
စီးပွားရေးအတွက် ငွေကြေးအရင်းအမြစ်/ဘဏ္ဍာအရင်း အမြစ်တွေကို ထိရောက်စွာ စုစည်းခွဲဝေအသုံးချနိုင်စွမ်း အားနည်းနေ တယ်ဆိုတာကို မငြင်းနိုင်ပါ
ပြည်တွင်းစုဆောင်းမှုအချိုး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအချိုးများဟာ ဒေသတွင်းနိုင်ငံများတွင် အနိမ့်ဆုံးဖြစ်ခြင်း ဘဏ်စနစ်ကို အသုံးပြုသူ လူဦးရေဟာ စုစုပေါင်းလူဦးရေရဲ့ ၁၀% ဝန်း ကျင်ခန့်သာရှိခြင်း တစ်ဆက်တည်းမှာ တရားဝင်ဖွဲ့စည်း လုပ်ဆောင်သော ငွေကြေးဈေးကွက်ကို အားထားတဲ့ ဦးရေထက် တရားမဝင် ငွေကြေးဈေးကွက်ကို အားထား သူဦးရေက များစွာပိုမိုကြီးမားခြင်း ပြည်တွင်း ငွေကြေး ဈေးကွက် နဲ့ အရင်းအနှီးဈေးကွက်တို့ဟာ ဥပဒေ နည်းဥပဒေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း လုပ်ငန်းဆိုင်ရာလက်သုံး ကိရိယာများ နည်းစနစ်များ အလုပ်အကိုင်ခွဲခြား လုပ် ကိုင်မှုအခြေအနေအဆင့်အတန်းများ ငွေရေးကြေးရေး ဈေးကွက်ဆိုင်ရာ အတတ်ပညာ နဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု အခြေ အနေများ ဈေးကွက်အခြေခံအဆောက်အအုံများကို ပြုပြင်တည်ဆောက်နေသည့်တိုင် တိုးတက်မှုနှေးကွေး နေခြင်း တို့ဟာ မြန်မာ့ငွေရေးကြေးရေးစနစ် ဖွံ့ဖြိုးမှု ဆက်လက်အားနည်းနေသေးခြင်းကို အလွယ်တကူမြင် သာစေတဲ့ အချင်းအရာများဖြစ်ပါတယ်
ငွေရေးကြေးရေးစနစ်တစ်ရပိကို ပြုပြင်တည်ဆောက် ရာမှာ အဓိကကျတဲ့ငွေရေး ကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဥပဒေ မှန်ကန် ထိရောက်ရေးကို မလုပ်ဆောင်သေးဘဲ အချိန်ဆွဲနေသမျှကာလပတ်လုံး ပုံစံတကျ လုပ်ဆောင်နိုင် မယ့် ဈေးကွက်ဖြစ်ထွန်းလာရေးဟာ အလှမ်းဝေးနေဦး မှာဖြစ်ပြီး ထိုအခြေအနေမှာ နိုင်ငံခြားဘဏ် များပါဝင် ဆောင်ရွက်ရေး ခေတ်မီနည်းပညာ အသုံးပြုမှု တိုးမြှင့်၍ ဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ် ပိုမိုကြီးထွားစေရေး အတိုးနှုန်းမူဝါဒ ပြုပြင်ရေး ဘဏ်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ထိန်းကျောင်းမှု ပိုမို ကောင်းမွန်ရေးစတဲ့ ကြိုးပမ်းမှုတွေဟာ ခိုင်မာတဲ့ အောင်မြင်မှုရရှိဖို့ အာမခံနိုင်မယ့်အနေအထားမရှိပါ ဥပမာ ငွေကြေး ဈေးကွက်ပီပီပြင်ပြင် လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ဈေးကွက်အစိတ်အပိုင်းတွေ ယန္တယားစနစ်တွ မဖန်တီးနိုင်ဘဲ ဈေးကွက်အတွင်း ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ရှိနေတဲ့ ငွေကြေးဝယ်လိုအားနဲ့ ရောင်းလိုအား အခြေ အနေများ ယင်းတို့ရဲ့ ပြောင်းလဲတက်ကျမှုများ ယင်းတို့ အပေါ် ပြည်တွင်းပြည်ပ စီးပွားရေးမူဝါဒတွေ အကြောင်း တရားတွေရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုအခြေအနေများနဲ့ ယင်းတို့ရဲ့ တုန့်ပြန်မှုများ တို့ကို မှန်မှန်ကန်ကန် မြင်တွေ့နိုင်ချေ အချိန်မီသိရှိမြင်တွေ့နိုင်ချေများလည်း လွန်စွာအားနည်း မှာ ဖြစ်ပါတယ် ခရက်ဒစ်ဗြူရို တစ်ခုထဲနဲ့လည်း မစွမ်း ဆောင်နိုင်ပါ ခရက်ဒစ်ဗြူရိုကောင်းစွာ အလုပ်လုပ် နိုင်ဖို့ ပင် အချိန်ယူရပါဦးမယ် ဈေးကွက်မှာ ရှိအပ်တဲ့ ငွေကြေး လုပ်ငန်းအမျိုးမျိုး ယင်းတို့အတွက်ချေးငွေများနဲ့ သက် တမ်းအမျိုးမျိုး စူးစိုက်မှုရည်ရွယ်ချက် အမျိုးမျိုးဖြင့် ဆောင်ရွက်သော အတိုးနှုန်းအမျိုးမျိုးကို မဖန်တီးနိုင် ဘဲဖြင့် မူဝါဒချမှတ်သူတွေက ဈေးကွက်အခြေအနေကို ကျယ်ပြန့် လုံလောက်တဲ့ကြိုတင် လေ့လာသုတေသနပြု လုပ်မှုလည်းမရှိဘဲ စေတနာတစ်ခုဖြင့် အတိုးနှုန်းဆိုင်ရာပြုပြင်မှုကိုဆောင်ရွက်ခြင်းဟာ အဆောက်အအုံကြီး နေတဲ့နာတာရှည် ရောဂါကို ဆေးမြီးတိုသုံး ကုသ သလို သာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်
financial inclusion 10% လောက်သာရှိတယ် ဆိုတာ ဟာ ငွေကြေးမူဝါဒလုပ်ဆောင်ရင်တောင် မူဝါဒရဲ့ တိုက် ရိုက်လွှမ်းမိုးမှုဟာ စုစုပေါင်းငွေကြေးဈေးကွက်လုပ် ငန်း များအပေါ် ၁၀ % အောက်အတိုင်းအတာသာ ရှိမယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်ပါတယ် လက်ရှိအနေအထားဖြင့် ငွေကြေး မူဝါဒတွေ ဘဏ္ဍာရေးမူဝါဒတွေ လုပ်ဆောင်ရင် ထိရောက် အောင်မြင်နိုင်မယ့် အလားအလာဟာနည်းပါး မယ်ဆိုတာ ကို ဒီအချက်က ထောက်ပြနေပါတယ်
ဒါ့အပြင် အတိုးနှုန်းမူဝါဒ မှန်ကန်ထိရောက်ဖို့ဆိုရာမှာ လုပ်ငန်းသဘာဝနဲ့ စီးပွားရေးလိုအင် အမျိုးမျိုး ကွဲပြား တည်ရှိမှုအရ မတူကွဲပြားဖြစ်ပေါ် ပြောင်းလဲသော ငွေကြေးနဲ့ချေးငွေ ဝယ်လိုအား ရောင်းလိုအားတို့အပေါ် မူဝါဒက ဆီလျော်စွာလွှမ်းမိုး ထိန်းကျောင်းနိုင်ရ မှာဖြစ် ပါတယ် ထိုအရာတွေမရှိပါဘဲနဲ့ အဆိုပါ ဝယ်လိုအား ရောင်းလိုအားကို ဈေးကွက်အခြေခံတဲ့နည်းနဲ့ ဘယ်လို လုပ်ပြီးသိရှိနိုင်ပါ့မလဲ ဒါတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မသိဘဲ ဈေးကွက်မှာရော တိုင်းပြည်ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုမှာရော အတွေ့ အကြုံ နဲ့အသိအတတ်ပညာ very limited ဖြစ်သူတွေချည်းဖြင့် ပုဂ္ဂဆန္ဒရှေ့မှာထားပြီးလုပ်ဆောင် တာတွေဟာ အမှောင်မှာ စမ်းတဝါးဝါး ခရီးသွားသည့် နှယ်သာရှိမှာဖြစ်ပါတယ်
မှားယွင်းမှုများ ရှင်းလင်းတိကျခြင်းမရှိမှုများ အခြေခံ ကျတာတွေပင်မပြည့်စုံမှုများဖြင့် တည်ဆဲ FIM Law က ဒါကိုဖော်ဆောင် မပေးနိုင်ပါ ထို့ပြင် အကိုင်အတွယ် မှားပြီး တိုင်းပြည်စီးပွားတိုးတက်ရေးမှာ အဟန့်အတား ပင်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဥပဒေဖြစ်ပါတယ် ဒါကိုမှန်မှန် ကန် ကန်ဖြစ်စေရန်ပြင်င်ဖို့ လိုအပ်လှပါတယ်
ခုတလော ဘဏ်အတိုးနှုန်းအကြောင်းအရာမှာ လုပ် ဆောင်တာ အရပ်သဘောဆွေး နွေးကြတာ တွေ့မြင်ရလို့ လက်ရှိကမ္ဘာ့ စီးပွားရေးမြေပြင်မှာ ဘဏ်လုပ်ငန်းနဲ့ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာဖြစ် ပေါ်မှုတွေမှာလည်း သင်ခန်းစာ ယူစရာတွေ တွေ့နေရတာလည်းရှိ လို့ ထိုအကြောင်းအ ရာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတချို့ကို တင်ပေးခဲ့ပါ တယ် အထူးသဖြင့် အတိုးနှုန်းမူဝါဒဟာ ဆီလျော် မှန်ကန် စွာမကျင့်သုံးနိုင်ရင် စီးပွားကျကပ်ငယ် ကိုဖြစ်စေ တဲ့ အကြောင်း နောက်ထပ်လည်းထပ်ဖြစ်စေမယ့် အခြေအ နေတွေ ပေါ် ပေါက်နေကြောင်း အမေရိကန် ဗဟိုဘဏ် သတင်း တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအတွေ့အကြုံသတင်း ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအလားအလာအပေါ် IMF ရဲ့ ခန်းမှန်း ချက်အစီရင်ခံစာ စသည်တို့မှတဆင့် မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်
ယခုဆက်စပ်ရေးသားတဲ့ Myanmar Investment Fund သတင်းဟာ မြန်မာ့ငွေရေးကြေးရေး ဈေးကွက်အ တွက် အပြုသဘော လက္ခဏာ ရှိတာကြောင့်တင်ပေး လိုက်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ် သို့သော် ဘယ်လောက် ခိုင်ခိုင်မာမာ အန္တရာယ်နည်းနည်းနဲ့ မြန်မာ့စီးပွားရေးအ တွက် ဒီလို Fund ကို အသုံးပြုနိုင်မလဲ သေချာ နားလည် ကြပါသလား ဒါတွေနဲ့ လက်တွဲကခုန်ဖို့ ကခုန်ရာမှာ ဟန်ချက်မပျက်သွက်လက် မှန်ကန်စေမယ့် တေးသွားနဲ့ စည်းချက်တွေကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် စဉ်းစားပြင်ဆင်ထားပြီးပြီ လားဆိုတာကို ရိုးရိုးသားသား တွေးဆ သတိရှိကြစေချင် လို့ ဒီစာတိုကိုရေးလိုက်ရပါတယ်။
Ref:Yin Mya FB
Posted by Ko Nge at Saturday, May 11, 2019 No comments:
အချိန်အခါမရွေး ဖြစ်ပွားနိုင်ပေမယ့် ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့ ရာသီဥတုပူပြင်းတဲ့ အချိန်တွေမှာဆိုရင်တော့ ဖြစ်ပွားမှုပိုများတယ်လို့ မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီးတွေက ဆိုပါတယ်။မျက်စိနာရောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့ ပြည်သူတွေ သတိပြုကာကွယ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီး ရန်ကုန်မျက်စိအထူးကုဆေးရုံကြီးနဲ့ ဆေးတက္ကသိုလ်(၁)၊မျက်စိရောဂါပညာဌာနက မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး ပါမောက္ခဒေါက်တာ ခင်ဥမ္မာခိုင်ကို မြန်မာတိုင်း(မ်)က တွေ့ဆုံမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
မျက်စိနာရောဂါ(သို့) မျက်မြှေးရောင်ရောဂါ(Conjunctivitis) ဆိုတာ Adeno ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့် အဖြစ်များတယ်လို့ မျက်စိအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးတွေက မှတ်ချက်ပေးကြပါတယ်။အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ဘက်တီးရီးယားနဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဆိုပြီး မျက်စိနာဖြစ်တာ နှစ်မျိုးရှိပြီးဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ မျက်စိနာရောဂါ (Viral Conjunctivitis)က ၈ဝ ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Q-မျက်စိနာရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကို ပထမဦးစွာ သိရှိလိုပါတယ်?
A-ပူတဲ့ရာသီနဲ့ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲဆိုရင် ဗိုင်းရပ်စ်တွေကကြွတတ်တယ်။ အဲဒီအခါ မျက်စိနာတာအဖြစ်များပါတယ်။ ဆေးပညာအခေါ်ဆိုရင်တော့ မျက် မြှေး ရောင် တယ်ပေါ့။ မျက်စိနာတာက ဘက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်တာက ခပ်နည်းနည်း၊ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်တာက ပိုများပါတယ်။များသောအားဖြင့် ဗိုင်းရပ်စ်တွေကတော့ ကိုယ့်အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေပေမဲ့ အဓိကကတော့ ကျွန်မတို့က အရာဝတ္ထုတွေကို လက်နဲ့ကိုင်တွယ်တဲ့အခါမှာမျက်စိနာတဲ့သူတွေရဲ့ရောဂါပိုးတွေက အဲဒီကနေတစ်ဆင့်ကူးတတ်ပါတယ်။ မျက်စိကနေ မျက်စိကို မကူးတတ်ဘူး။ ကိုယ့်လက်ကနေ မျက်စိကိုသွားထိတဲ့ ကိစ္စက အရေးကြီး တယ်။ ဒါကြောင့် လက်ကိုခဏခဏဆေးဖို့လိုတယ်။ ကိုယ်က မျက်စိမနာပေမဲ့ လက်နဲ့မျက်စိကိုထိခဲ့ရင် ကိုယ့်လက်ကနေ ရောဂါပိုးကူးတတ်ပါတယ်။ မျက်စိယားလို့ လက်နဲ့ပွတ်တာတွေက မကောင်းပါဘူး။ မျက်စိနာတဲ့အထဲမှာ Viral Conjunctivitis က အရမ်းကူးစက်လွယ်တယ်။ မျက်လုံးတစ်ဖက်တည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်၊ နှစ်ဖက်စလုံးလည်းဖြစ်တတ်တယ်။ ဒီလိုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် ကိုယ့်ဘေးနာကလူတွေကို ကူးလွယ်တယ်။ နောက်တစ်ခုက အိမ်တွေမှာ မျက်နှာသုတ်ပဝါတွေကို မျှဝေသုံးစွဲတာတွေရှိပါတယ်။ အဲဒီလိုတူတူသုံး တယ်ဆိုလို့ရှိရင် နောက်တစ်ယောက်ကို ကူးမှာပဲ။ ဒါ့ပြင် Eye makeup စတဲ့ အလှကုန်အသုံး အဆောင်တွေကိုအတူတူသုံးတာကနေလည်းတစ်ဆင့် ကူးတာတွေရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုက ရေကူးကန်တွေပေါ့။ နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်ဆိုရင် ရေကူးကြတာတွေလည်းများတယ်။ ကလိုရင်းသေချာခပ်ထားတဲ့ ရေကူးကန်တွေကတော့ အကြောင်းမဟုတ်ဘူး။ အဲဒါကြောင့် ကိုယ့်ကလေးမျက်စိနာနေရင် မလွှတ်ပါနဲ့လို့ ကျွန်မတို့ပြောတာတွေရှိပါတယ်။ အများနဲ့ထိတွေ့တော့ ဒီရေကူးကန်တွေကလည်း ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
Q-မျက်စိနာဖြစ်ရင်တွေ့ရမယ့် ရောဂါလက္ခဏာတွေကို သိပါရစေ?
A-မျက်စိနာတာက စစချင်းတော့ မျက်လုံးထဲမှာ ခိုးလိုးခုလုဖြစ်သလိုရှိတယ်။ မျက်စိကအောင့်သလိုနဲ့ နေရထိုင်ရခက်တော့ မျက်လုံးကို ပွတ်တာတွေ ရှိတယ်။ ပွတ်တဲ့အခါမျက်စိကနီရဲလာတယ်။မျက်ခွံလေးတွေ နည်းနည်းဖောင်းလာတယ်။ မျက်ဝတ်လေးတွေ ထွက်လာတယ်။ မျက်ဝတ်က အရောင်ဝါဝါကြီးတွေ မထွက်ဘူး။ Viral Conjunctivitis က မျက်ဝတ်မထွက်ဘဲ မျက်ရည်ကျတယ်။ မျက်ဝတ်ထွက်တယ်ဆိုရင်လည်း အရမ်းဝါထိန်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ခပ်ကြည်ကြည်ပဲ။ မျက်ဝတ်ဆိုတာက ခန္ဓာကိုယ်မှာမျက်စိက နေရထိုင်ရခက်ရင် ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တိုင်က မျက်ဝတ်ကို ထုတ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။
Q-မျက်စိနာရောဂါရဲ့ နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ အမြင်အာရုံကို ကျစေလားဆိုတာ သိလိုပါတယ်?
A-မျက်စိနာတာဟာ ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ အမြင်အားမကျပါဘူး။ တော်ရုံတန်ရုံ မျက်စိနာတာအစပိုင်းဆိုလို့ရှိရင် မျက်ဝတ်လေးရှိလို့ မျက်ရည်လေးကျလို့ ကြည့်ရခက်တာပဲ ရှိပါတယ်။ အမြင်အားကတော့ အပြည့်ကောင်းတယ်။ တချို့ကျတော့ ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကြောင့် မျက်မြှေးရောင်တာတင်မကတော့ဘဲနဲ့ တစ်ပတ်၊ နှစ်ပတ် လောက်ကြာတဲ့အခါ မျက်ကြည်လွှာပေါ်မှာ အစက် အပြောက်လေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ အဲဒီအခါကျရင်တော့ အမြင်အားကျပါတယ်။ ကြည့်ရတာ ဝါးတားတားဖြစ်နေတယ်။ နေရောင်ထဲထွက်ရင် မခံနိုင်ဘူး။
Q-မျက်စိနာရင် ပျောက်ကင်းဖို့အချိန်ဘယ်လောက်ထိ ကြာတတ်ပါလဲ?
A-မျက်စိနာတာကတော့ ဘက်တီးရီးယားကြောင့်နဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်နာတာဆိုပြီး အကြမ်းဖျင်းနှစ်မျိုးရှိတယ်။ ဘက်တီးရီးယားကြောင့် မျက်စိနာတာကတော့ ငါးရက်ကနေ ခုနစ်ရက်လောက်ဆို ကောင်းတာပဲ။ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်ရင်တော့ သူ့ထက်ပိုကြာနိုင်ပြိး နှစ်ပတ်ကနေ သုံးပတ်အတွင်း ကြာနိုင်တယ်။မျက်စိနာတာက အချိန်မရွေးဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့လူအများစုဖြစ်တတ်တဲ့ ကာလလေးတွေတော့ရှိတာပေါ့။ ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲနဲ့ အခုလိုနွေရာသီဆို ပိုဖြစ်တယ်။ ဒီရောဂါက တစ်နှစ်မှာနှစ်ကြိမ်၊ သုံးကြိမ်လောက်ဖြစ်နိုင်တယ်။ ရာသီဥတုပူပြင်းရင်တော့ ပိုများတာပေါ့။
Q-ဘယ်လို အသက်အရွယ်မျိုးတွေမှာ ပိုဖြစ်တာတွေ့ရလဲဆိုတာ သိရှိလိုပါတယ်?
A-များသောအားဖြင့် ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်မျက်စိနာတာ ကတော့ လူလတ်နဲ့ လူငယ်ပိုင်းတွေမှာဖြစ်တာ များတယ်။ အိမ်ထဲမှာပဲနေတဲ့ သက်ကြီးဘိုးဘွားတွေထက် စာရင် အပြင်နဲ့အထိအတွေ့များတဲ့သူတွေက ပိုဖြစ်တယ်။ကလေးနဲ့လူကြီးဆိုရင် ကလေးတွေရဲ့ကိုယ်ခံအားက လူကြီးလောက်မကောင်းတော့ ကလေးတွေမျက်စိနာရင် တော်တော်ဆိုးတယ်။ မျက်ခွံတွေကဖောင်းရောင်ပြီး တော့ နှစ်ဖက်စလုံးလည်းဖြစ်တတ်တယ်။ မျက်စိကလည်း ရဲတွက်နေတတ်ပါတယ်။
Q-မျက်စိနာရောဂါကို ဘယ်လိုကုသရပါသလဲဆိုတာ သိပါရစေ?
A-တကယ်တမ်းပြောရရင် မျက်စိနာတာဟာ ဆေးကုကု၊မကုကု သူ့ဘာသာသူ ကောင်းပါတယ်။ သူ့အလိုလိုပြန်ကောင်းတဲ့ရောဂါထဲမှာပါတယ်။ ဆေးခပ်ခပ်၊ မခပ်ခပ် ကောင်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ တချို့မျက်စိနာတာက ဘက်တီးရီးယားကြောင့်နာပြီး သုံးရက်ထက်ပိုလာမယ်၊ မျက်ဝတ်တွေလည်း အများကြီးထွက်လာပြီး မျက်စိနာတာလည်း ဆိုးလာဆိုရင်တော့ ဆေးခတ်ဖို့လိုပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း သူ့ဘာသာသူ ကောင်းလေ့ရှိတယ် ။ မျက်စိနာတဲ့ ကာလအတွင်းမှာဗိုင်းရပ်စ်ကိုကုနိုင်တဲ့ဆေးဆိုတာလည်း မရှိဘူး။ ဘက်တီးရီးယားမှာတော့ ရှိတယ်။ ပဋိဇီဝဆေး ( antibiotic) တွေနဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကိုကုတယ်။ symptomatic treatment လို့ခေါ်တဲ့ သက်သာအောင်၊ နေသာအောင် ကုတဲ့ကုထုံးတွေနဲ့လည်း ကုတယ်။ဥပမာ မျက်ခွံကြီးတွေက ရောင်ပြီးတော့ရဲနေတယ်ဆိုရင် ရေခဲအုပ်တာမျိုးပေါ့။ အအေးဓာတ်ပေးတယ်။ ရေခဲအုပ်ခြင်းအားဖြင့် သွေးကြောတွေက ကျုံ့တဲ့အခါကျတော့ ရောင်တာလည်း သက်သာတယ်။ နီတာလည်း သက်သာတယ်။ နာတာလည်း သက်သာတယ်။နောက်တစ်ခုက မျက်ရည်အတုပေါ့။ မျက်စိက နေရခက်တဲ့အခါကျရင် မျက်စဉ်းလေးခတ်လိုက်ရင် ဖြေသာတယ်။ မျက်ရည်တုတွေက လူတွေကို အန္တရာယ် လည်းမရှိဘူး။ လူကိုနေသာအောင် ခတ်တာဆိုတော့ မျက်ရည်တုဆေးတွေ သုံးလို့ရပါတယ်။တကယ်လို့များ တချို့ဗိုင်းရပ်စ်တွေက သိပ်ပြင်းပြီးတော့ မျက်စိရောင်လွန်းရင်တော့ ကျွန်မတို့က အရောင်ကျတဲ့ဆေး (စတီးရွိုက်)တွေ ပေးရတယ်။ viral ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ မျက်စိနာတဲ့ဟာဆိုရင် ဘက်တီးရီးယားပါ ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ စတီးရွိုက် သတ်သတ်မပေးဘဲ စတီးရွိုက်နဲ့ ပဋိဇီဝဆေးကိုပါတွဲပြီးပေးတယ်။ မျက်ကြည်လွှာပေါ်မှာ အစက်အပြောက်လေးတွေဖြစ်လာရင်တော့ စတီးရွိုက်ကိုသုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုပေးခြင်းအားဖြင့် စတီးရွိုက်ရဲ့အာနိသင်ကြောင့် ရောင်ယမ်းတာတွေသက်သာတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဗိုင်းရပ်စ်က နှစ်ပတ်ကနေ သုံးပတ်အထိကြာနိုင်ပါတယ်။
A-ရိုးရိုး Viral Conjunctivitis ကတော့ စိတ်ပူစရာမရှိပေမဲ့ အခြားအခြားသော အကြောင်းတွေဆိုရင်တော့ သတိထားရမှာတွေတော့ ရှိပါတယ်။ အဓိကကတော့ ကိုယ့်အနီးအနားမှာ မျက်စိနာတဲ့သူရှိနေရင် ကိုယ့်လက်နဲ့မျက်စိကိုမထိဖို့ဘဲ။ သူ့မျက်စိကနေ သူ့လက်၊ သူ့လက်ကနေအခြားလူကိုကူးနိုင်တော့ ကာယကံရှင်က လက်ကိုခဏခဏဆေးဖို့လိုပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လက်ဆေးတဲ့ကိစ္စက အဓိကပါပဲ။ရာသီဥတုရဲ့အပူဒဏ်က သိပ်များရင်ကျန်းမာတဲ့သူဖြစ်ပစေ ကိုယ်ခံအားက ကျသွားတတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်အပူဒဏ်ကို ကာကွယ်တဲ့နေထိုင်တာတွေလည်း လုပ်သင့်တယ်။ ဒီလိုအချိန်တွေမှာဆိုရင် ရောဂါကအရမ်းကူးလွယ်လို့ သတိထားရပါမယ်။
A-အဓိကကတော့ ကိုယ့်အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်မှာ မျက်စိနာတယ်ဆိုရင် ဒါအဖြစ်များတဲ့ ကာလလို့ပဲ သတ်မှတ်ရမှာပေါ့။ ကိုယ့်အနီးအနားမှာ မျက်စိနာတယ် ဆိုတာ တော်တော်များများဖြစ်လို့သာ နာတာလေ။ အကုန်လုံးမှာ ကာကွယ်ရေးက အဓိကပဲဖြစ်တော့ လက်ဆေးမယ့်ကိစ္စတွေကိုပဲ အဓိကပြောချင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုက လူနာတွေကိုအဓိကနားလည်အောင်ပြောရတာက မျက်စိနာဖြစ်ရင် သူသူကိုယ်ကိုယ် ချက်ချင်းကောင်းချင်တယ်။ အဲဒီတော့အရမ်းမျှော်လင့်ကြပါတယ်။ဆေးခန်းတစ်ခု၊ ဆေးရုံတစ်ခုကိုသွားပြရင် သူတို့က ပုံမှန်ဆေးထည့်လိုက်ရင် တစ်ရက်၊ နှစ်ရက်ဆို ကောင်းမယ်လို့ထင်ကြတယ်။ သူတို့ကြိုပြီးတော့ မျှော်လင့်တဲ့ ကိစ္စတွေကိုကျွန်မတို့က သူရဲ့သဘာဝအတိုင်းမျှော်လင့်ဖို့ သတိပေးရတယ်။ဒါမျိုးက နှစ်ပတ်(သို့မဟုတ်)သုံးပတ်အထိကြာတတ်တယ်။ မျက်ကြည်လွှာမထိရင် အမြင်ကတော့မဝါးဘူး။ တကယ်လို့များ အမြင်ဝါးလာတယ်၊ နေရောင်စူးလာတယ်ဆိုရင်လည်း သက်ဆိုင်ရာမျက်စိဆရာဝန်ကြီးတွေဆီမှာ ပြသဖို့ လိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုက မျက်စိအရမ်းနာရင် မျက်လုံးအတွင်းက သွေးကြောတွေရောင်ပြီး မျက်ရည်တွေက သွေးရည်ကြည်လိုမျိုး မျက်ရည်တွေကျတတ်ပါတယ်။ သွေးရောင်လေးတွေ ထွက်တတ်တယ်။ ဒါကို လူတွေက အရမ်းကြောက်တတ်ပါတယ်။ ဒါလည်း အမြင်အားကောင်းနေရင် အရမ်းကြီးမစိုးရိမ်ရပါဘူး။ နောက်တစ်ခုမှာ ချင်တာက မျက်စိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆေးတွေဆိုရင် ကိုယ်ဘာသာကိုယ် မဝယ်ဘဲ ဆရာဝန်တွေရဲ့ အကြံပြုချက်နဲ့သာ ဝယ်သင့်၊သုံးသင့်ပါတယ်။
The Myanmar Times :https://myanmar.mmtimes.com/news/122939.html
Posted by Ko Nge at Thursday, May 09, 2019 No comments:
Labels: ကျန်းမာရေး, ပညာရေး, ဗဟုသုတ
​ချောက်​ထဲပဲ ကျ ကျ
​ရေထဲပဲ မြုပ်​ မြုပ်​ ။
လက်​ပိုက်​ပြီးသာ ပြုံးပြုံး​လေး ကြည့်​​
ကိုယ်​ တစ်​​ယောက်​တည်း ခံရမှာ မှ မဟုတ်​တာ ။
နိုင်​ငံနဲ့ ချီပြီး သစ္စာ​ဖောက်​လည်း
အချိန်​တန်​ရင်​ ​ထောင်​ က လွတ်​တယ်​။
နိုင်​ငံနဲ့ဆိုင်​တဲ့ အချက်​အလက်​​တွေ ​ရောင်းစားလည်း
အဖြူ​ကောင်​​တွေ ​အသံ​ပေးရင်​ ပျာယာ​တွေခတ်​တယ်​။
အမည်း​ကောင်​​တွေ ​ကြေငြာချက်​ထုတ်​ရင်​ ဒူး​တွေတုန်​တယ်​။
တရုတ်​ကို ​ကြောက်​ရပါတယ်​ .. တဲ့။
အရင်​​ခေတ်​ ​ပြောခဲ့တုန်း က
အားလုံးကို ​ကြောက်​ကြရတဲ့ ဘ၀။
လက်​ခုပ်​သံ ယူမယ့်​သူ​တွေလည်း မရှိကြ​တော့။
ဆဲမယ့်​ ဆိုမယ့်​ သူ​တွေလည်း မရှိကြ​တော့။
​လောက်​​ကောင်​​တွေ က ​​ကျေနပ်​​ပျော်​ရွှင်​ကြလို့။
ဆု​တွေ ဘာ​တွေ ရလို့။
တိုက်​​တွေ ဘာ​တွေ ​ဆောက်​လို့။
ကား​တွေ ဘာ​တွေ စီးလို့။
​ငွေရှာ​ကြတဲ့ ​ကောင်​​တွေ များ​တဲ့ ​ခေတ်​မှာ
တိုင်းပြည်​ကလည်း အစိတ်​စိတ်​ အပိုင်းပိုင်းဖြစ်​လို့။
စိတ်​ဆန္ဒ​တွေကလည်း တစ်​စစီ ကွဲလို့။
သူပုန်​ ကို တိုက်​လို့
စစ်​သား​တွေ က ..
ရှိသမျှ အမျိုးအ​ဆွေပါမကျန်​ အဆဲခံကြရ။
မိသားစုကို စွန့်​ခဲ့ကြတာ ။
သဲထဲ ​ရေသွန်​သလို ဖြစ်​ခဲ့ရ။
အာဆာ ကို တိုက်​လည်း အဆဲခံရ။
​အေ​အေ ကို တိုက်​လည်း အ​ဆဲခံရ။
အာဆာ ကို တိုက်​တုန်းကလည်း
​အေ​အေ ကို တိုက်​တုန်းကလည်း
စစ်​ပွဲ အတွင်းမှာ အသက်​​ပျောက်​သွားကြတဲ့အခါ
စစ်​သား​တွေ ကို အပြစ်​တင်​ကြ။
သူပုန်​ သူကန်​​တွေကို တရို​တ​သေ ဆက်​ဆံကြ။
စစ်​သား ကျည်​ဆံ တစ်​ချက်​ က
လူတစ်​​ယောက်​ပဲ ​သေတယ်​ ဆိုကြပါစို့။
က​လောင်​တံ တစ်​ချက်​ ​အောက်​မှာ
စစ်​သား​တွေ အကြိမ်​ကြိမ်​ ​သေခဲ့ရ။
စစ်​သား မိသားစု​တွေ အကြိမ်​ကြိမ်​ နာကျင်​ခဲ့ရ။
သူပုန်​သူကန်​ ကို သတ်​တယ်​လို့ ဆိုဆို
သတင်း​ပေးကို သတ်​တယ်​လို့ ​ပြော​ပြော
စစ်​သား​တွေ ​ထောင်​ကျတဲ့အခါ ..
တစ်​ချို့​တွေ ၀မ်းသာ အားရဖြစ်​လို့။
တစ်​ချို့​တွေ ​ပျော်​လို့ ရွှင်​လို့။
တစ်​ချို့ ​တွေ မီဒီယာစာမျက်​နှာထက်​မှာ ​ဖော်​ပြကြလို့။
ဘယ်​ စစ်​သားမိသားစုဝင်​ မှ
လူ့ အခွင့်​အ​ရေး တို့
ဘာအ​ရေး တို့ ညာ အ​ရေး တို့ မ​အော်​ခဲ့ကြ။
သမ္မတကြီး ဘာညာ ဆိုပြီး
စကားကြီး စကားကျယ်​​တွေ မ​ပြောခဲ့ကြ။
၀ဋ်​​ကြွေး အ​တော်​ကြီးကြတဲ့ ​ကောင်​​တွေ။
ကွဲကွဲပြားပြား မမြင်​နိုင်​​သေးတဲ့ တိုင်းပြည်​မှာ
အကုသိုလ်​ အ​တော်​ကြီးကြတဲ့ ​ကောင်​​တွေ။
စစ်​တပ်​ကို ဆဲရဲ ဆိုရဲ
သူရဲ​ကောင်းလို ချီူကျူးဂုဏ်​ပြုကြတဲ့ တိုင်းပြည်​မှာ
စစ်​တပ်​ ကို ​စော်​ကားမှ
ထမင်းစားလက်​မှတ်​ရမယ့်​​ကောင်​​တွေ ရှိတဲ့ တိုင်းပြည်​မှာ
၀ဋ်​နာ ကံနာ အ​တော်​ကြီးကြတဲ့ ​ကောင်​​တွေ။
၀ီ စတန်း ၀ှစ်​ခ်ျ​ မရှိ ​ပေမယ့်​
၀ီ စတန်း ၀ှစ်​ခ်ျ​ ရှိတဲ့ တိုင်းပြည်​။
၀ီ စတန်း ၀ှစ်​ခ်ျ​ မရှိ​ပေမယ့်​
သစ္စာ​ဖောက်​ မိသားစု​တွေ အတွက်​
ဟူးမန်း ရိုက်​တ်​ မရှိ​ပေမယ့်​
သူပုန်​ သူကန်​ နဲ့ သစ္စာ​ဖောက်​​တွေ အတွက်​
ဟူးမန်း ရိုက်​တ်​ ရှိတဲ့ တိုင်းပြည်​။
အဖြူ​ကောင်​ အမည်း​ကောင်​​တွေ က
​ကြေငြာချက်​ ထုတ်​တာ မရှိ​ပေမယ့်​
​ကြေငြာချက်​ ခဏ ခဏ ထုတ်​ကြတဲ့ တိုင်းပြည်​။
သူပုန်​ သူကန်​ နဲ့ သစ္စာ​ဖောက်​​တွေပါ
လွတ်​ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်​ ရှိတဲ့ တိုင်းပြည်​။
ကိုယ့်​ မိသားစုအိမ်​မှာ ​နေရင်း
ကိုယ့်​ ကို အသက်​အန္တရာယ်​ မပြုမချင်း
အဆဲမခံရဖို့ ငြိမ်ြ​ငိမ်​​လေးသာ ​နေကြ​တော့။
အပြစ်​​ပြောမခံရဖို့ တိုးတိုးသက်​သာ ​နေကြ​တော့။
၀ီ စတန်း ၀ှစ်​ခ်ျ​ မရှိတဲ့ တိုင်းပြည်​မှာ
ကိုယ့်​ အသက်​ကို မထိပါး​သေးသမျှ
ဟူးမန်း ရိုက်​ခ်ျ​ မရှိတဲ့ တိုင်းပြည်​မှာ
ကိုယ့်​ မိသားစု ကို မ​စော်​ကား​သေးသမျှ
စစ်​တပ်​ ဆဲချင်​တဲ့​ကောင်​​တွေ ဆဲကြမယ်​။
စစ်​တပ်​​ကြောင့်​ အပြစ်​ပုံချမယ့်​​ကောင်​​တွေ ၀င်​​ယောင်​ကြမယ်​။
ကီးဘုတ်​ကိုင်​ပြီး စစ်​တိုက်​မယ့်​​ကောင်​​တွေ စစ်​တိုက်​ကြမယ်​။
အဲဒီလို တိုင်းပြည်​မှာ ။
Labels: ဘာသာရေး, မူခင်း, ဖြစ်ရပ်မှန်, လူထုအော်သံ, လူမျိုး, လူမှုရေး, နိုင်ငံရေး
ဘဏ်မှာ ချေးငွေရဖို့လုပ်ငန်းရှင်တချို့ ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ လိမ်လည်"
"ဘဏ်မှာ ချေးငွေရဖို့လုပ်ငန်းရှင်တချို့ ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ လိမ်လည်"
လုပ်ငန်းရှင်တချို့ ဘဏ်က ချေးငွေရရှိဖို့နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ လိမ်ညာထုတ်ချေးတာတွေကြောင့်ဘဏ်တွေဘက် က စည်း ကမ်းချက်တွေ ပိုတင်းကျပ်လာရတယ်လို့ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာဆီက သိရပါတယ်။
မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ကို customer တစ်ယောက်ရောက်လာပါတယ်။သူ့ကိုကြည့်ရတာဟာလည်းသွက်သွက်လက်လက် နဲ့ လုပ်ငန်းလည်း အတော်ကောင်းတဲ့ ပုံပါပဲ။ ချေး ငွေအကြောင်းအရာတွေနဲ့လည်းတော်တော်လေးရင်းနှီးမှုရှိပုံပေါ်ပါတယ်လို့ ဆိုတယ်။
သည်လုပ်ငန်းရှင်က ဘဏ် က တာဝန်ရှိသူကမေးမြန်းသမျှတွေကိုလည်း မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲဖြေဆိုပြန်ပြောပြ နိုင်ပါတယ်။
သူလိုချင်တာက CGI(အ ပေါင်ပစ္စည်းတင်ပြစရာမလိုတဲ့အာမခံစနစ် - Credit Guarantee Insurance)စနစ်နဲ့သိန်း ၂ဝဝ ပဲ ချေးငွေ လိုချင်တာပါ။
သည်အခါမှာ ချေးငွေထုတ် ချေးပေးမယ့်တာဝန်ရှိသူဦးအောင်မျိုးထွန်းက ဘာကြောင့်လုပ်ငန်းကောင်းရဲ့သားနဲ့ အာမခံအပေါင်ပစ္စည်းမပေးတာလဲမေးတဲ့အခါမှာအပေါင်ပစ္စည်း ပေးစရာမရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ဘယ်မှာနေလဲဆိုတော့ အိမ်မှာနေတယ်လို့ ဖြေပါတယ်။
သည်လိုနဲ့မေးရင်းမေး ရင်းနဲ့ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်မှာလာပြီးတော့ CGI နဲ့ အရင်ချေးငွေယူ ထားမယ် ၊မကြာခင်လာမယ့် JICA ချေးငွေ အတွက်ကို သူကပိုင်ဆိုင်မှုကို အာမခံထားပြီးတော့ နောက်တစ်ဘဏ်မှာသွားချေးမယ်ဆိုတဲ့ သူရဲ့ plan ပါလာ ပါတယ်။
မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် လက် ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ (ဘဏ် ၃) က ဦးအောင်မျိုးထွန်းက“ဥပမာ သဘောတစ်ခုက ဘဏ်နှစ်ဘဏ်က ရထားတဲ့ချေးငွေနဲ့ သူ့ရဲ့အိမ်တန်ဖိုးနဲ့ ပြန်ပြီးချိန်ကြည့်လိုက်လို့တန်တယ် ဆိုလို့ရှိရင် သူ က အဆုံးခံရင်ခံမယ့်သဘောရှိတယ်၊
အိမ်ကို အဆုံးခံပြီးတော့ လုပ်ချင်ရာသာ လုပ်ကြပေတော့ ဆိုပြီးတော့ အဲဒီပြဿနာတွေက အတော်ဖြစ်တယ်၊
အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့မှာ တော်တော်ကို စိစစ်ရတယ်၊
စိစစ် ပြန်တော့လဲ ကြာလို့ပေါ့၊ မစိစစ်ပြန်တော့လဲပြည်သူလူထုငွေကြေးဆုံးရှုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တာဝန်ရှိတဲ့သူ ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာ ဖြစ်မှာပဲလေ”လို့ ပြောပါတယ်။
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ထဲက နာမည်ကြီး စာရေးကိရိယာထုတ်လုပ်တဲ့ စက် ရုံကြီး တစ်ရုံကပါ။
စာရွက်စာအုပ်တွေ နဲ့ တစ်ရှူးတွေ ထုတ်လုပ်နေတဲ့ ၊ကုမ္ဗ ဏီကြီး တစ်ခုလို ထုတ်လုပ်နေတဲ့ စက်ရုံကြီးတစ်ခုက ဘဏ်မှာငွေလာချေး ပါတယ်။
အက်စ်အမ်အီး ချေးငွေ စတင်ချေးတဲ့အချိန်မှာအက်စ်အမ်အီး ချေးငွေ လိုချင်တယ်ဆိုပြီးမြန်မာ့ စီးပွားရေးဘဏ် မှာလာလျှောက်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းကို ကြည့်လိုက်တဲ့ အခါမှာလည်း သူလုပ်တဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းက ချေးငွေဦးစားပေး လုပ်ငန်းထဲမှာ အ ကျုံးဝင်ပါတယ်။
သည်လုပ်ငန်းရှင်က တရုတ် ပြည် ကနေ ကုန်ကြမ်းသွင်းပြီးတော့ လုပ်နေရတယ်။မားကက်ကလည်း ရှိတဲ့အတွက်တရုတ်ပြည်က ကုန်ကြမ်းမသွင်းတော့ဘဲ စက်တွေဝယ်ဖို့လာလျှောက် တာပါ။
စက်ရုံ ဧရိယာကြီးက ဘယ် လောက်ကျန်သေးတယ် ၊အခုလက်ရှိ မှာလည်း အဲသည်စက်ရုံ ဧရိယာကြီးမှာအဆောက် အအုံဆောက်ပြီးပြီ၊စက် တွေ ထပ်တည့်ရုံပဲ ၊အဲသည်တော့ အစိုးရကနေ ကူညီပေးပါဆိုပြီးချေး ငွေ လာလျှောက်တာ ဖြစ်တယ်။
တာဝန်ရှိသူကလည်း မြေပြင်ကိုဆင်းကြည့်တဲ့အခါမှာလုပ်ငန်း က တော်တော်လေးကောင်းပြီး လုပ်သားဦးရေလည်း တော်တော်များတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ဘယ်လောက်ချေးချင်တာလဲ မေးတဲ့အခါမှာသိန်း ၁၀,ဝဝဝ လိုချင်ပါ တယ်လို့ ဖြေပါတယ်။
သိန်း ၁၀,ဝဝဝ တော့ ချေးလို့ မရဘူး၊ဘဏ်ရဲ့ ကန့်သတ်ချက် က အက်စ်အမ်အီးသည်သိန်း ၃ဝဝဝ ထက် ပို မချေးဘူး။
သိန်း ၁၀,ဝဝဝ လိုချင်ရင် ၄င်းရဲ့အာမခံ အပေါင်ပစ္စည်းကို တန်ဖိုးသင့်ဖြတ်မယ်လို့ တာဝန်ရှိသူ က ဆိုပါတယ်။
သည်လိုဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် အဆောက်အအုံတန်ဖိုးနဲ့ မြေတန်ဖိုးအပေါ်မှာ ချေးငွေမူဘောင် ထဲမှာဝင်တဲ့ပမာဏကို သူက ရရှိမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။
သည်အခါမှာ သူက အက်စ် အမ် အီးနဲ့ ဘောင်ဝင်တဲ့သိန်း ၃ဝဝဝ ပဲ ယူမယ်လို့ ဆိုလာပါတယ်။
သည်လိုဆိုလည်း အပေါင်ပစ္စည်း အဖြစ်အဆောက်အအုံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဂရန်တွေ ပြခိုင်းတဲ့အခါမှာ မိတ္တူတွေ ပြပါတယ်။
အခုအချိန် မိတ္တူပြတာကိစ္စမရှိ ဘူး၊သက်ဆိုင်ရာက ဆင့်ကဲဆင့်ကဲ လာစစ်တဲ့ အချိန်မှာမူရင်းပြရတော့မယ်လို့ ပြောတဲ့အခါ ၄င်းလုပ်ငန်းရှင်က အခြားဘဏ်မှာ အပေါင်ထားကာ ချေးငွေရထားပြီးသားဖြစ်နေပါတယ်။
တခြားဘဏ်မှာ အတိုး ၁၃ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ အပေါင်ထားထားပြီးတော့ အပေါင် သွားဖြတ်ပြီး မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ကို ကိုးရာခိုင်နှုန်းတိုးနဲ့ ပြောင်းချေးချင်တာဖြစ်နေပါတယ်။
အဲသည်လိုမျိုး ချေးချင်တယ် ဆိုရင်လည်း ရပါတယ်။ဒါကြောင့် ဟိုဘက် ဘဏ်မှာ အာမခံကို အတိုး နဲ့အရင်းနဲ့ဖြတ်ခဲ့ပြီး ဂရန်မူရင်းကို ထုတ်ခဲ့ ပြီး ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုယူခဲ့ ပြီး ချေးငွေ တင်ပါလို့ ပြောတဲ့အခါ မှာတော့သူက မြန်မာ့စီးပွားရေး ဘဏ်က ခွင့်ပြုမိန့်ချ ပေး၊သည်လိုရပြီးတော့မှ ဟိုဘက်က ဘဏ်ကိုသွား ပြီးတော့အပေါင်ဖြတ်ပြီးရင် မူရင်းတွေကိုယူလာပြီး လုပ်ပေးပါလို့ ဆိုလာပြန်ပါတယ်။
တာဝန်ရှိသူက လက်မခံတဲ့ အခါမှာ ဆွေးနွေးလို့မရတဲ့အဆုံးမှာ နောက်ဆုံးတော့ အာမခံအပေါင်ပစ္စည်းမပါဘဲ သိန်း ၂ဝဝ ပဲ ယူမယ်လို့ဆိုလာပြန်ပါတယ်။
သူ့လုပ်ငန်း ရဲ့ဝန်ထမ်းများရဲ့ တစ်လစာ ဝန်ထမ်းစရိတ်က လစာအ တွက်ပဲ သိန်း ၁ဝဝ ကျော် ရှိနေပါတယ်။
ဦးအောင်မျိုးထွန်းက“ကျွန် တော် က ပြောပြတယ်၊ကျွန်တော် က သိန်း ၂ဝဝ ပေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့ သိန်း ၂ဝဝ က ခင်ဗျားမှာဝန်ထမ်းလစာ နှစ်လ ပေးလိုက်တာနဲ့ ကုန် ပြီ၊သူ့ ချေးငွေက ဘာအကျိုးမှ မရှိဘူး၊သို့သော် ခင်ဗျားက မယူတော့ဘဲနဲ့ ခင်ဗျားထက်ပိုပြီးတော့ တကယ်ကို လုပ်ငန်းသေးသေးလေးလုပ်ပြီးဒီ ပိုက်ဆံလေးကိုရရင် သူ့မှာ တော်တော်ကိုအကျိုးအမြတ်ရှိမယ်ဆိုတဲ့ လူကို ကျွန်တော်ကဦးစားပေးချင်တယ်၊ အဲဒီတော့ ခင်ဗျားမယူပါနဲ့ ၊ခင်ဗျား နောက်ဆုတ်ပါလို့ ပြောလိုက်ရတယ်”လို့ ဆိုပါတယ်။
လုပ်ငန်းရှင်က JICA ချေးငွေလာရင် ၄င်းအနေနဲ့customer အ ဟောင်းဖြစ်အောင်လို့ လာဦးထားတဲ့သဘောလို့ သိရပါတယ်။
မြန်မာ့ စီးပွားရေးဘဏ်ကို CGI စနစ်နဲ့ ချေးငွေချေးချင်တဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ဦးရောက်လာပါတယ်။
တာဝန်ရှိသူကမေးတဲ့ အခါမှာ အခု သူနေနေတဲ့ အိမ်ကိုဘာလို့ အာမခံပစ္စည်း မပေးတာလဲ မေးတဲ့အခါမှာ၎င်းအမည်ပေါက် မဟုတ်လို့ဆိုပြီး ဖြေပါတယ်။
အာမခံပစ္စည်းပေးရင် ကာယကံရှင်ရဲ့ အမည်ပေါက်တဲ့အိမ်ခြံမြေတိုက်တာ ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ သတ် မှတ်ချက်ကရှိပါတယ်။
အိမ်ကို စာချုပ်ပြခိုင်းတဲ့အခါ မှာ ၂ဝဝဝ ပြည့်နှစ်ကဝယ်ထား တာပါ။နောက်ပြီး စပယ်ရှယ်ပါဝါပြပါတယ်။
ဒါဆို စပယ်ရှယ်ပါဝါ ပါတယ်။ သည်အိမ်ဂရန်ပြောင်းဖို့၂ဝဝဝ ပြည့်နှစ်ကနေ ၂၀၁၈ ခုနှစ် အတွင်း ၁၈ နှစ်လုံးလုံးကို သည်ဂရန်အမည်ပြောင်းဖို့လည်းရောင်းသွားတဲ့ ပိုင်ရှင်က စပယ်ရှယ်ပါဝါပေးထားပြီးသား ၊ ဘာကြောင့် မလုပ်တာလဲလို့ ဘဏ်ကမေးပါတယ်။
သည် အခါမှာ အမျိုးသမီး က ပြန်ဖြေလိုက်တာ ကအခွန်ပေးရမှာစိုးလို့ဆိုပြီး ပြောပါတယ်။
“ပြည်သူလူထုက တိုင်းပြည်အပေါ်မှာ စေတနာရှိသလားဆိုတဲ့ အချက်အပေါ်မှာလဲ တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရမယ်၊
အစိုးရမှာပဲ တာဝန်ရှိတာ မဟုတ်ဘူး၊အစိုးရဝန်ထမ်းမှာ ချည်းပဲလဲ တာဝန်ရှိတာ မဟုတ်ဘူး၊ပြည်သူ တစ်ဦးချင်းရဲ့ စေတနာဟာလဲ တိုင်း ပြည်အတွက် တော်တော်ကို တာသွားတဲ့ အရာပါ”လို့၎င်းက ပြောပါတယ်။
အာမခံပစ္စည်းနဲ့ ချေးငွေလာရောက် လျှောက်ထားသူတစ်ယောက် လာချေးတဲ့အခါမှာ လုပ်ငန်းရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်က အခွန် ပြေစာကို တင်ပြပါလို့ ဘဏ်ကတင်ပြခိုင်းတဲ့အချိန်မှာ အခွန်ပြေစာကို တင်ပြပါတယ်။
မူရင်းအစစ်ကို ပြနိုင်တဲ့ အတွက် သက်ဆိုင်ရာဘဏ်ကို စစ်ဆေးမေးမြန်းတဲ့အခါမှာလည်း စာရင်းနံပါတ်၊ကုမ္ဗဏီပိုင်ရှင် အားလုံး မှန်ပါတယ်။
အရှုံးအမြတ်စာရင်း သုံးနှစ်စာ ပေးပါလို့ တောင်းတော့ရောက်ရှိလာတဲ့ အချိန်မှာတော့ ဆောင်ထားတဲ့အမြတ်ခွန်နဲ့ မမျှတတဲ့ အရမ်းများပြားတဲ့ အမြတ်ကိုပြထားပါတယ်။
“ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ သူမြတ်မှ အစိုးရက သူ့ကိုယုံကြည် ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့က ပိုက်ဆံချေးမှာကိုး၊အဲဒီနှစ်ခုကို နှိုင်းယှဉ်လိုက်တာနဲ့တင် သူ့ရဲ့စေတနာဟာ ကွဲကွဲပြားပြားသိသာတယ်၊သိန်း ၁ဝဝဝ အမြတ်ပြထားရင် သိန်း ၁ဝဝဝ နဲ့မျှတတဲ့ အခွန်ကို ဆောင်ထားသလားဆိုပြီး အခွန်ပြေစာကိုကြည့်လိုက်တော့ ၁၀ သိန်း ပေါ်မှာပဲဆောင်ထားတာ တွေ့ရတယ်” လို့ဦးအောင်မျိုးထွန်းက ပြောပြပါတယ်။
တစ်နေ့မှာ ချေးငွေ ချေးချင်တဲ့ လူနှစ်ယောက်ရောက်လာပါတယ်။ ဘဏ်တွေရဲ့ ချေးငွေလုပ်ငန်း စဉ်အ တိုင်း အမြတ်ခွန်ပြေစာမိတ္တူများ၊ စည်ပင်သာယာခွန်မိတ္တူတင်ပြဖို့ တောင်းခံရာမှာ သူက အပေါင်ပစ္စည်းပေးပါတယ်။
တာဝန်ရှိသူကလည်း အပေါင်ပစ္စည်းပေးတော့ကျေနပ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆုံးရှုံးနိုင်စရာအခြေအနေ သိပ် မရှိဘူး။ ဆုံးရင်တောင်အခြေအနေမ ကောင်းရင် တရားမလမ်းကြောင်းပေါ်တက်ပြီးအိမ်လေလံပစ်လိုက်ရင် ပိုက်ဆံပြန်ရမှာပဲလို့တွေးပါတယ်။
သူကတော့ ထူးခြားစွာနဲ့ အ ခွန် ပြေစာကိုပလတ်စတစ်လောင်း လာပါတယ်။ ပုံမှန် အခွန်ပြေစာတောင်းရင် တွန့်ကြေနေတာတွေကို ပဲ ပေးတတ်ကြတာကြောင့် မျက်လုံးကို မနည်းပြူးပြီးဖတ်ရတဲ့စာရွက်မျိုးတွေပါ။
ဘဏ်က မသင်္ကာလို့သံသယ ဖြစ်လို့ ဘယ်ဘဏ်မှာပေးဆောင်ထား တာလဲ ဆိုတော့ ရွှေပြည်သာဘဏ်လို့ သိရပါတယ်။
ဘဏ်အချင်းချင်း ရွှေ ပြည်သာဘဏ်မန်နေဂျာကိုဖုန်းဆက် ကြည့်တဲ့အခါမှာ ၂၂ ရက် ၂လ ၂၀၁၇အဲသည်အခွန်ပေးသွင်းတဲ့ စာရင်းကို ကြည့်ခိုင်းတဲ့အခါမှာ ငွေပမာဏ၊ စာရင်းနံပါတ်၊ ဘဏ် တံဆိပ်များအကုန် မှန်ပါတယ်။
ပလတ်စတစ်လောင်းတာကို သံသယ ဖြစ်တာကြောင့်ဘဏ်က လက်ခံကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ ပို့ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ ဘဏ်မှာကျန်ခဲ့တာက ချလန်အစစ်ဖြစ်နေပြီးတော့ အချက်အလက်ပဲမှန်ကန် ပြီး ပလတ်စတစ်လောင်းထားတဲ့ ချလန် က အတု ဖြစ်နေပါတယ်။
လာတဲ့လူနှစ်ယောက်ရဲ့တော်စပ်ပုံကို မေးလိုက်တဲ့အခါမှာ သား အဖလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သား ကအဖေ ထက် အသက်ကြီးနေတဲ့ပုံပေါက်တာကြောင့်တာဝန်ရှိသူက သန်းခေါင်စာရင်းမိတ္တူပြခိုင်းရာမှာအတုလုပ်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
“အဲဒီလို အတုတွေကို တော်တော် ဝေခွဲရခက်တဲ့အချိန်မှာ ဘဏ် တွေက ပိုက်ဆံချေးဖို့ ငြင်းတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာ ဒါလေးတွေလဲ အခြေခံအကြောင်းတရားတွေ ပါတာပေါ့၊သန်းခေါင်စာရင်းအတုမှာလဲ သားအဖအဖြစ်နဲ့ ဖော်ပြထားတယ်”လို့ ဦးအောင်မျိုးထွန်း ကသူ့ရဲ့ အတွေ့အကြုံကို ပြောပါတယ်။
မှတ်ပုံတင် အတု၊အဖေ အတု
ချေးငွေလာချေးတဲ့အခါ သွားရောက်စစ်ဆေးတဲ့အချိန်မှာအဖေ က အိမ်လေးလုံးရှိတယ်။လူမနေတဲ့အိမ် ကဂရန်ကို ခိုးလာပြီး သား က ငွေလာ ချေးတယ်။
ကြည့်လိုက်တော့ အဖေ့နာမည်၊အဖေနဲ့ စာရင်းဖွင့်ရမယ်ဆိုတော့ အဖေ့ရဲ့ နာမည်တွေ၊ မှတ်ပုံတင်တွေ အကုန်တူပါတယ်။ လာတဲ့သူကလည်း သူ့ထဲမှာ ပြထားတဲ့အဖေပါပဲ။
မှတ်ပုံတင်က ဟောင်းနွမ်း နေရမယ့် အစားလတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကြီးဖြစ်နေစရာအကြောင်း မရှိတာကြောင့် ပြန်ပြီးစစ်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာတော့အတုဆိုပြီး၊အဖြေထွက်ပါတယ်။
“အခုအမှုဖွင့် ၊ရဲဖမ်းဘာညာနဲ့ လုပ်တော့ ဝုန်းဒိုင်းကြဲပြီးဘယ်ပျောက်သွားလိုက်လဲ မသိဘူး၊ ဒါတွေ အကုန်လုံးကို နှိပ်ကွပ်ဖို့ဆိုတော့လဲ ကျွန်တော်တို့က လုပ်လို့မရပြန်ဘူး၊ ပြည်ထဲရေးက လုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေပေါ့”လို့ ၄င်းက ဆိုပါတယ်။
နောက်ထပ်ကြုံရတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုကတော့ဂရန်နှစ်ခုနဲ့ ဘဏ်နှစ်ခုမှာ ချေးငွေချေးထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မျိုးလည်း ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက ဂရန်နှစ်ခုနဲ့ဘဏ် နှစ်ဘဏ်မှာ ချေးခဲ့ပြီး တစ်ခုကို ပြန်ရွေး ပြီးတော့ customer ကို ရောင်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
“ဂရန်က ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တော့လဲ ဟုတ်တယ်၊သူပြတာလဲ မူရင်းပဲ၊ ကျွန်တော့်မှာလဲ အော်ရီဂျင်နယ်ပဲ”လို့ ဦးအောင်မျိုးထွန်း က ပြော ပါတယ်။
တရားရုံး တက်ချိန်မှာတော့ ဘယ် ဘဏ်မှာ အရင်ချေးထားတာလဲဆိုတာ ကြည့်တဲ့အခါမှာ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်က အရင်ချေးထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ကိုချေးတဲ့ဂရန်ကသာ အစစ်ဖြစ်တယ်လို့ အသိအမှတ်ပြုပြီး အနိုင်ရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
ခြုံငုံသုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်“အခုအချိန်မှာ ကဏ္ဍစုံမှာ အဆင်မပြေကြဘူးပေါ့၊
ဒီတော့ငွေအလုံးအရင်း ထွက်လာစရာ ဘဏ်ပဲရှိတယ်၊အဲဒီတော့ ဘဏ်တွေကိုလာပြီး လိမ်လည်ဖို့ ကြိုးစားလာကြတယ်” လို့ ဦးအောင်မျိုးထွန်းက ပြောပါတယ်။
crd Alex W. Yan
If you have our sakura pink 500g pack of brown rice, we are excited to dropateaser of our incoming harvest!
Brand new packaging in 2kg and 5kg. Join us over at The Little Rice Company, and get our rice directly from the website on the 17th April!
စင်ကာပူနိုင်ငံအခြေစိုက် အရည်အသွေးမြင့် ဆန်ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသော Golden Sunland, Food & Beverage ကုမ္ပဏီသည် တစ်နှစ်လျှင် ဆန်တန်ချိန် ၅ဝ,ဝဝဝ အထိ ကြိတ်ခွဲထုတ်လုပ်နိုင်သော အကြီးစားဆန်စက်ကို နေပြည်တော်တွင် စတင် တည်ဆောက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဆန်စက်ကို နေပြည်တော် လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ ပျံချီကျေးရွာအနီးရှိ ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးဘေးတွင် တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း စက်ရုံတည်ဆောက်ရန် ပန္နက်ရိုက်အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည့် လယ်ဝေးမြို့နယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမျိုးဇော်ဦးက မြန်မာတိုင်း(မ်)ကို ပြောသည်။
''တစ်နှစ်ကို ဆန်တန်ချိန် ၅ဝ,ဝဝဝ ကြိတ်ခွဲထုတ်လုပ်နိုင်မယ်လို့ ပြောတယ်''ဟု နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
Golden Sunland သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ စပါးမျိုးရင်းဖြစ်သော ရွှေဝါထွန်းစပါးမျိုးနှင့် မျိုးစပ်ဖော်ထုတ်ထားသည့် ရွှေဝါဝင်းစပါးမျိုးသစ်ကို ဒေသခံတောင်သူများနှင့် အကျိုးတူပူးပေါင်း စိုက်ပျိုးသွားမည်ဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်လျှင် ဧက ၁၅,ဝဝဝ ကျော်အထိ စိုက်ပျိုးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၄င်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
''အဲဒီစက်ရုံနဲ့ လက်လှမ်းမီတဲ့ ရွာတွေပေါ့ဗျာ။ ပြီးတော့ စစ်တောင်းမြစ်အရှေ့ဘက်ကမ်းက ရွာတွေတောင် အကျိုးတူလယ်ယာ (Contract Farming) စနစ်နဲ့ စိုက်ပျိုးသွားမယ့်အထဲမှာ ပါဝင်လာနိုင်ပါတယ်''ဟု ဦးမျိုးဇော်ဦးက ပြောသည်။
ထိုကဲ့သို့ တောင်သူများ အကျိုးတူ စိုက်ပျိုးနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်း ရရှိလာခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ကာ တောင်သူရော၊ နိုင်ငံပါ အကျိုးရှိစေမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း ၄င်းက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
Golden Sunland ကလည်း ၄င်း၏ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင် ပန္နက်တင်မင်္ဂလာအခမ်းအနား ကျင်းပသည့်ဓာတ်ပုံများ တင်ထားသကဲ့သို့ နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်စွဲဖြင့်လည်း တစ်နှစ်လျှင် တန်ချိန် ၅ဝ,ဝဝဝ ထုတ်လုပ်နိုင်သွားမည်ဟု ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏအနေဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ငါးသန်းမြှုပ်နှံသွားမည်ဟု ကုမ္ပဏီဘက်က ဆိုထားသည်။
ဒေသခံလယ်သမားတစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုမျိုးဝင်းကလည်း contract farming စနစ်ကို ဂဃနဏ မသိသေးသည့်တိုင် အရည်အသွေးကောင်းသော မျိုးစေ့၊ နည်းပညာနှင့် ခိုင်မာသောဈေးနှုန်းတို့ ရရှိမည်ဖြစ်သောကြောင့် အကျိုးတူလယ်ယာစနစ်ကို စိတ်ဝင်တစားရှိနေကြောင်း ပြောသည်။
''အကျိုးတူဆိုလား ကန်ထရိုက်ဆိုလား သေချာတော့ မသိဘူးဗျ။ ကြားရသလောက်ဆို ကုမ္ပဏီက မျိုးစေ့နဲ့ ချေးငွေပေးမယ် ပြောတယ်။ ပြီးတော့ ဈေးနှုန်းကိုလည်း အာမခံမယ်လို့ ကြားတယ်။ တကယ်လို့သာ အဲဒီလိုဖြစ်လာရင်တော့ အရမ်းကောင်းတာပေါ့ဗျာ''ဟု ၄င်း၏ အမြင်ကိုပြောသည်။
တောင်သူများသည် သီးနှံအထွက်နှုန်း မသေချာမှုအတွက် စိုးရိမ်မူများရှိနေသကဲ့သို့ ဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုအတွက်ကိုပါ စွန့်စားနေရလျက်ရှိရာ အကျိုးတူလယ်ယာ (contract farming) စနစ်သည် ၄င်းတို့အတွက် အပြုသဘော ဆောင်လာနိုင်ကြောင်း မျှော်လင့်လျက်ရှိသည်။
We sell 100% brown rice, which we developed using traditional hybrid technology.
You can purchase our rice at Khoo Teck Puat Hospital Retail Pharmacy or online at our website TheLittleRiceCompany.com/shop
In our fields of rice in Myanmar,alone tree lies, watching over the land and greeting our farmer partners before they begin their toil each new day. 🌳🌾
မြန်မာ ပြည်ကထွက်တဲ့ဆန်ဆို ပေမဲ့?ကိုယ်တွေမပိုင်ပါ😥😥😥
- စင်ကာပူနိုင်ငံသား မိတ် ဆွေတစ်ဦးက ပြောလာတယ်
" မင်းတို့တိုင်းပြည်ကထွက်တဲ့ Brown Rice ဆန် အရည်အ သွေးကောင်းလိုက်တာတဲ့"
တ လောက အာဖရိက မှာ မြန်မာဆန်တွေဖျက်ဆီးခံရတဲ့သတင်းကလည်းလိုင်းပေါ်မှာ တွေ့လိုက်တာမကြာ သေးတော့...လာပြီးနောက် နေတာလား? လို့ စိတ်ထဲ မှာဖြစ်ရပ်က အမှန် ပေမဲ့ မခံချင်သလိုသြဖစ်မိ သေး( နောက် တော့လွှဲမှားသော စိတ်ဓါတ်ကို နိုင်ငံချစ်တယ်၊အမျိုးချစ်တယ်ဆို ပြီးဖုံးကွယ်တတ်တဲ့ မ ကောင်းသောအကျင့်၊ပြောင်းလဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အသိတရားရလိုက်တယ်။)
" မြန်မာ ပြည်ကထွက်တာဆို ဘယ်မှာလဲ? ဘာတံဆိပ် လဲ?" မေးလိုက်တော့
- " Golden Sunland”
Fragrant Brown Rice”ဆို ပြီးဓါတ်ပုံ လေးပြတယ်"
- မင်းတို့တိုင်းပြည်ကို စင်ကာပူ မိသားစုcompany က အစအဆုံး ပါကင်ထုတ်လုပ်အပြီးသွားရောက်စိုက်ပျိုး ပြီး ၊စင်ကာပူမှာ ရောင်းတာပါတဲ့၊ ဆေးရုံ တွေမှာလည်းဒီဆန် နဲ့ချက် ပြီး ရောင်းချ နေတယ်" ပြောသွား တယ်။
- မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာ လယ်ယာစိုက်ပျိုး ရေးကအဓိကဏ္ဍဆိုတာ နှစ် ပေါင်းများစွာစိုက်ပျိုးခဲ့ကြပါတယ်။
- မြေ မရှိတဲ့ စင်ကာပူက လယ်ယာ မြေများစွာရှိတဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာလာ ရောက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံစိုက်ပျိုးရေးလာလုပ် ပြီး အရည်အ သွေးအဆင်မြင့်တဲ့ထုတ်ကုန် ကို ဂုဏ်ယူစွာ ရောင်းချ နေပါတယ်။
- မြန်မာ နိုင်ငံက ထွက် ကုန်ဆိုရင် အရည်အ သွေးမမှီလို့၊ တိုင်းပြည်စီးပွားရေးမ ကောင်းလို့၊အစိုးရအခွန်ကောက်တာများလို့၊ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် ဒီလိုပဲလုပ် လာတာ၊ ဈေးနှုန်း မရလို့၊ဈေးကြီးတာမစားလို့စသဖြင့်တို့ ကြောင့်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆို ပြီးကြားနေရတာ တွေရဲ့ Gravity အပြင် ဘက် ခုန် ထွက် ကြည့်လိုက်ရင်....
- ဒီစင်ကာပူကုမ္ပဏီ က..မြန်မာ မြေ၊မြန်မာ ရေ၊မြန်မာပြည် လယ်သမား၊အလုပ်သမားများစွာအသုံးချ ပြီး..မြန်မာ ပြည်အစိုးရရဲ့မူဝါဒစည်းမျည်းတွေထဲက နေ အခုလို အရည်အ သွေးအဆင့်မှီဆန် ထုတ်ကုန်ကို မြန်မာ ပြည်ဈေးနှုန်းထက် မြင့်မားသော ဈေးနှုန်းဖြင့် ရောင်းချ နေတာ လက် တွေ့ တွေ့မြင် နေရ တော့....
- လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ အ တွေးအခေါ်စိတ်ဓါတ်၊ပြောင်းလဲမှု့နဲ့အတူ ကျွန်မအ ပေါ်မှာ ရေးထားခဲ့သလို အမှန် ပေမဲ့ တလွှဲမာနငါတို့ဟာရှေ့ယခင်က ရွှေထီးဆောင်းခဲ့ သော မြန်မာ့သမိုင်းထဲမှာ တဝဲလည်လည် တွေးတောရင်း ၊စိတ်ကြီးဝင်၍မသိ၊မတတ် တာကိုဝန်ခံရမှာဖုံးကွယ်ရင်း..အမှန် တရားနဲ့ ဝေးကွာသွားစေ သောစိတ်ဓါတ်အကျင့် များကို ပြု ပြင်ပြောင်းလဲကြပါစို့....
- အ လောင်းမင်းတရားကြီးဦးအောင်ဇေယျ
ယခု လက်ရှိပြည်သူ့ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည် အလွန်
မြန်မာပြည်အတွက် နောက်ထပ်ခေါင်းဆောင်များစွာထက် အရည်အချင်း၊အရည်အ သွေး၊ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းမွန် သော ပြည်သူများစွာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပေါ်ထွန်းလာပါ စေရန် ပြည်သူတစ်ဦးချင်းစီကိုယ်ပိုင်အသိဖြင့် ကြိုးစားကြပါစို့🙏🙏🙏
Labels: စီးပွားရေး, နည်းပညာ, အတွေးအခေါ်, အရောင်းအ၀ယ်, ဈေးကွက်
NCBI လို့ခေါ်တဲ့ US National Center of Biotechnology Information က မြန်မာပြည်က migrant ခလေးတွေ ရဲ့သွေးမှာ ခဲအဆိပ် ပါဝင်မူ့မြင့်မားနေတဲ့အတွက် ခလေးတွေလိမ်းတဲ့ သနပ်ခါးတွေကိုစမ်းသပ်တဲ့အခါ ခဲ ပါဝင်မူ့ မြင့်မားနေတာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်। သနပ်ခါးမှာ ပါဝင်တဲ့ ခဲအဆိပ်တွေ အရည်ပြား pore တွေကနေစိမ့်ဝင်ပြီး ဖြစ်ပွားမူ့ပါ ဒါပေမဲ့ သနပ်ခါးအခေါက်ကနေ ခဲအဆိပ်ဖြစ်တာမဟုတ်နိုင်ပဲ ready made သနပ်ခါးလုပ်ရာမှာ သုံးတဲ့ kaolin powder, borax, ဒါတွေကနေ ခဲအဆိပ်ပါဝင်တာဖြစ်ဖို့များပါတယ်। ဒီအဆင့်ကိုတော့ မြန်မာပြည်က ပညာရှင်တွေ ရှာဖွေသက်သေပြသင့်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မြန်မာပြည်မှာ ဘယ်သနပ်ခါးလုပ်ငန်းရှင်မှ cosmetic grade ကုန်ကြမ်းမသုံးပါဘူး သနပ်ခါးအမှူန့်ခလေးတွေကို အလွယ်လိမ်းပေးကြတာ အန္တရာယ်ရှိပါတယ် beautiful poision ဆိုပြီး NCBI အောက်မှာရှိပါတယ်။
နိုင်ငံရေးဒုက္ခသည်တွေ မြန်မာပြည်ကနေကမ္ဘာတစ်လွားပြန့်သွားချိနိမှာ မြန်မာဆေးအစွမ်းကို ကမ္ဘာတစ်လွားကသိသွားကြတယ် ဒေါ်ကြင်တို့ ထက်လင်းတို့ ထိပ်ပြောင်ကြီးတို့ တံဆိပ်မျိုးစုံခင်ဗျ နာမည်ကောင်းနဲ့သိတာတော့မဟုတ်ဘူး နာမည်ဆိုးနဲ့သိတာပါ immigrants တွေရဲ့ ကျန်းမာရေးကို အထူးပြုလေ့လာတဲ့ Australia က သုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကဘ၂၀၁၂ ထဲက ထုတ်ပြန်ထားတာရှိသလို မီဒီယာတွေမှာလဲကြိုကြားကြိုကြားပေါ်လာတတ်တယ် အဓိက heavy metal တွေဖြစ်တဲ့ မာကြူရီ ခဲ ပြဒါး ဒါတွေ ပါနေကြပါတယ် heavy metal ဆိုတာကလဲ သီချင်းသာ လေးလေးကြီးနဲ့ နားထောင်လို့ကောင်းတာ metal ကျ တော့ ခန္တာကိုယ်ထဲဝင်ပြီးပြန်မထွက်ပဲ bio accumulation ဖြစ်တော့အတော်ကိုကြောက်စရာကောင်းပါတယ် ဒီမှာလူအတော်များများ ပေါ့ပေါ့ဆဆ တွက်တဲ့ အချက်နှစ်ချက် stupid taboo ရှိတယ် နွယ်မြစ်သစ်ပင်ဆေးဖက်ဝင် ဆိုပြီး အတိုင်းအဆမသိစားတာရာယ် နောက်တစ်ခုက စားတာမဟုတ်ဘူး လိမ်းဆေးပဲဆိုပြီး ပေါ့ပေါ့တွေးကြတာရာယ် နွယ်မြစ်ပင်လဲ လိုတဲ့အဟာရကို မြေကြီးကနေစုတ်ယူရလို့ heavy metal ပါဝင်မူ့မြင့်တဲ့နေရာက ဆိုရင်သဘာဝအရ heavy metal ပါဝင်မူ့ ဟာ ဒီအပင်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေမှာစုနေတတ်တယ် heavy metal ဆိုပေမဲ့ သူ့ရဲ့ molecule size က လူ့အရေပြားရဲ့ pore size ထက်ငယ်လို့ ointment တွေမှာ lubricant action နဲ့ အရေပြားထဲကို အလွယ်တစ်ကူစိမ့်ဝင်သွားတယ် ဒါကြောင့် နွယ်မြစ်သစ်ပင်ဆိုပြီး လွယ်လွယ်စားသူတွေ လိမ်းဆေးပဲဆိုပြီး ပေါ့ပေါ့ သဘောထားသူတွေ သိထားသင့်ပါတယ် heavy metal poision ဖြစ်ရင် ဘာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာ လူအတော်များများသိထားကြပေမဲ့ နောက်အသိနည်းသေးတဲ့အချက်က အခုနောက်ပိုင်းခေတ်စားလာတဲ့ autoimmune ခင်ဗျ ဒီ ရောဂါဟာ heavy metal poisoning ကနေလဲ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် ဒါ့ကြောင့် ဘကြီးဘုန်းကြီး ဆေးနည်းတွေဟာလဲ သတိကြီးကြီထားသင့်ပါတယ်ခင်ဗျ။
Labels: ကျန်းမာရေး, စီးပွားရေး
EP လား၊ S pass လား? ရတဲ့ လခ မှန်ဖို့ အရေးကြီးတယ်
စင်ကာပူမှာ WP နဲ့ S pass ပါမစ်ကိုတာရဖို့အရေး အလုပ်ရှင်တွေအတွက် စိန်ခေါ်မှုတွေ အရင်ထက် ပိုပြီးများလာပါပြီ။ အထူးသဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းတွေရဲ့ ကုမ္ပဏီ အလတ်စားနဲ့ အသေးစားများမှာ နိုင်ငံသားနဲ့ PR တွေအတွက် ဆွဲဆောင်မှုအားနည်းတဲ့ အလုပ်၊ လစာ နဲ့ အလုပ်ချိန်များကြောင့် မလေးရှားနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံမှ ဝန်ထမ်းများကို ခန့်ထားနိုင်မှသာ အဆင်ပြေတာပါ။
ဒါပေမယ့် မလေးရှားနဲ့ တရုတ်ဝန်ထမ်းတွေအတွက် ပေးရတဲ့ လစာကလည်း မနည်းဘူး။ အမ်အိုအမ်ရဲ့ ပါမစ်ကန့်သတ်ချက်တွေဟာ ကုမ္ပဏီ အလတ်စားနဲ့ အသေးစားများအပေါ် ကြီးမားတဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ရှိနေတာမို့ အလုပ်ရှင်တွေလည်း ဒီကိစ္စအပေါ်အမြဲ ဝေဖန်လေ့ရှိပါတယ်။
လုံးဝ ထွက်ပေါက်မရှိတဲ့ အလုပ်ရှင်တွေအတွက်ကတော့ အမ်အိုအမ်ရဲ့ နိုင်ငံခြားသား အလုပ်ခန့်ထားရေးအတွက် ဥပဒေကို မျက်ကွယ်ပြုပြီး မသမာတဲ့ လုပ်ရပ်တွေ ဖန်တီးလာပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ကံမကောင်းတဲ့ အလုပ်ရှင်တွေနဲ့အတူ ရွေးချယ်စရာအခြားနည်းလမ်းမရှိလို့ အလုပ်ဝင်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံခြားသားဝန်ထမ်းတွေလည်း နှစ်စဉ်လို အရေးယူခံရတာတွေ ရှိနေပါတယ်။
အဓိက အခက်အခဲကတော့ နိုင်ငံခြားသား ခန့်ထားဖို့ WP နဲ့ S Pass အတွက် ကိုတာ (Quota) မရကြတာပါ။ ကုမ္ပဏီမှာ ခန့်ထားတဲ့ နိုင်ငံသားနဲ့ PR ဦးရေ အချိုးအစားအရ ကိုတာချပေးတဲ့ စနစ်ဟာလည်း စင်ကာပူအစိုးရရဲ့ သူ့နိုင်ငံသား အကျိုးကာကွယ်ရေးနဲ့ နိုင်ငံခြားသား ဝန်ထမ်းဦးရေကို ထိန်းချုပ်တဲ့ စနစ်ပါဘဲ။
ဒီတော့ ကိုတာ ရဖို့ ဘာလုပ်သလဲဆိုရင် (Phantom Worker) ဟန်ပြ ဝန်ထမ်းတွေ ခန့်ကြတော့တာပါဘဲ။ နီးစပ်ရာကနေ နိုင်ငံသား နဲ့ ပီအာတွေကို အနည်းဆုံး လစာပမာဏတစ်ခုကိုပြပြီး CPF ထည့်ပေးကာ ကိုတာ ရအောင်လုပ်ကြတာဟာ အခုချိန်ထိ ရှိနေတုန်းမို့ မကြာခဏဆိုသလို အမ်အိုအမ်ရဲ့ အရေးယူတဲ့ သတင်းတွေကို ဖတ်နေရဆဲပါ။
ဒီလို ကိုတာရဖို့အတွက် နိုင်ငံသား နဲ့ ပီအာတွေကို မက်လုံးတစ်ခုပေး၊ CPF ထည့်ပေးရတာနဲ့ အလုပ်ရှင်တွေအတွက် ကုန်ကျစရိတ် တက်လာပါပြီ။ ဒီကုန်ကျစရိတ်တွေ ကာမိအောင် ဘာလုပ်မယ်ထင်သလဲ။ လက်ရှိကာလအထိ အပြင်မှာ တွေ့နေရတာကတော့ အဲ့ဒီကုန်ကျစရိတ်တွေ ကာမိအောင် ခန့်ထားတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေဆီကနေ ရတဲ့နည်းနဲ့ ရသလောက် ပြန်ယူတာပါဘဲ။
WP သမားတွေဆိုရင်လည်း အလုပ်ရှင်တွေဟာ အလုပ်သမား အပြောင်းအလဲကို ၁ နှစ်တစ်ကြိမ်၊ ၂ နှစ်တစ်ကြိမ်လုပ်ပြီး အလုပ်သမားအသစ်တွေဆီကနေ ပွဲခကို အေးဂျင့်နဲ့ ပေါင်းပြီး ယူကြပါတယ်။ ဒီတော့ အလုပ်သမား တစ်ယောက်ကို ကြာကြာမခန့်တော့ပါဘူး။ တစ်ချို့တွေဆို ၆ လ လောက်ခန့်ပြီး ရမယ်ရှာ အလုပ်ဖြုတ်တာမျိုးတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ အလုပ်သမား အဝင်အထွက်များလေ ကိုတာအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကာမိလေပါဘဲ။ ဒါတွေက စင်ကာပူမှာ အခုမှ ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး၊ အရင်ကတည်းက အလုပ်ရှင်အချို့နဲ့အလုပ်အေးဂျင်တွေ ပေါင်းလုပ်နေတာပါ။ ဒါကို အမ်အိုအမ်ဘက်က သိတာနဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေး အရေးယူတာပါဘဲ။
အလုပ်ရှင်ဟာ အလုပ်သမားဆီကနေ အခကြေးငွေယူပြီး အလုပ်ခန့်တာကို Kickback ယူတယ်လို့ သတင်းတွေမှာ ရေးလေ့ရှိပါတယ်။ နှစ်စဉ်လို အရေးယူခံရတဲ့ အလုပ်ရှင်တွေရှိနေတာတောင် လုပ်နေသေးတဲ့ သူတွေ ရှိနေတုန်းပါ။
ဒီတော့ ကိုတာတွေရဖို့အတွက် မမှန်မကန်လုပ်ပြီး ရအောင်လုပ်ကြသလို၊ ကုန်ကျစရိတ် ကာမိအောင် Kickback ယူတယ်။ နောက်ထပ် အလားတူ လုပ်ရပ်တွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ဒါကတော့ S pass အတွက် လစာကို အမ်အိုအမ်ရဲ့ ပြဌာန်းသတ်မှတ်ချက်မီအောင် Pass လျှောက်စဉ်မှာ အမှန်တစ်ကယ်ပေးတာထက် ပိုပြပြီး၊ အလုပ်ရာထူးကိုလည်း ကြီးကြပ်ရေးမှုးအဆင့်ထက် မနိမ့်တဲ့ ရာထူးနဲ့ လျှောက်ပြီး အမှန်တော့ ကာယအလုပ်သမား အဆင့်နဲ့ ခိုင်းနေတဲ့ လုပ်ရပ်တွေပါ။
ပါမစ်ကိုတာအရ WP နဲ့ S Pass ကို ခွဲပြီးချပေးတာပါ။ ဒီတော့ WP ကိုတာ မရှိတော့ရင် S Pass လျှောက်ရမှာဘဲပေါ့။ ဒါပေမယ့် အလုပ်မှာ အမှန်တစ်ကယ်လိုတာက အလုပ်သမား အဆင့်ပါ။ ဒါပေမယ့် S pass လျှောက်လို့ ရအောင် ရတဲ့ နည်းနဲ့ ဘောင်ဝင်အောင်လုပ်ကြတဲ့အခါမှာ ရာထူး၊ လစာ၊ ပညာအရည်အချင်းနဲ့ အရင်အလုပ်အတွေ့အကြုံတွေပါ မဟုတ်တရုတ်တွေ လုပ်ကြပါတော့တယ်။ အချို့တွေဆိုရင် ရာထူးကြီးကြီးတွေနဲ့ ကော်ဖီဆိုင်၊ ပေါက်စီဆိုင်တွေမှာ လုပ်နေတာတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ ထားပါတော့၊ ရရာ အလုပ် လုပ်ရမယ်ဆိုပေမယ့် ဒီလိုမျိုး အသား ငါးရောင်းတဲ့ ဈေးထဲက ကော်ဖီဆိုင်မှာ အရာရှိအနေနဲ့ ခန့်ပြီး S Pass ဒါမှမဟုတ် EP ရလာတာကတော့ ကျွန်တော်လည်း ရှင်းမပြတတ်ပါ။
အကယ်၍ လုံးဝ ကိုတာ မရှိရင်တော့ အလုပ်ရှင်တွေဟာ EP နဲ့ ခန့်ဖို့ ကြိုးစားကြပါတော့တယ်။ EP ဆိုတာ ကျွန်တော်သိသလောက် ရဖို့ အခွင့်အလမ်း အရမ်းနည်းပါတယ်။ ဒါကလည်း အမ်အိုအမ် သတ်ချက်အရ ကိုတာ မလို၊ WP နဲ့S Pass တွေလို အလုပ်ရှင်ဘက်က လဲဗီးပေးစရာမလိုတဲ့အတွက် တစ်နည်းတဖုန် နိုင်ငံခြားသား ခန့်ဖို့ အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပေါ့။
EP ရဖို့ ခက်တယ်လို့ ကျွန်တော်ပြောနေပေမယ့် အလွယ်တကူရတာတွေလည်း တွေ့နေရပါတယ်။ လူမှန်၊ နေရာမှန်၊ လစာမှန်နဲ့ အားလုံး မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ လုပ်နေတဲ့ EP ကိုင်ထားသူတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲ ပါမစ် ကိုတာ မရနိုင်တဲ့အခါမှာ ခန့်ချင်တာကလည်း အလုပ်သမားအဆင့်လောက် ဖြစ်နေတော့ EP အတွက် မန်နေဂျာရာထူး၊ လစာတွေ ထောင်ပေါင်းများစွာနဲ့ အလုပ်ရှင်ကနေ လျှောက်ပေးထားသူတွေအတွက် ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြဿနာတွေ ရှိနေပါတယ်။
ရာထူးဟာ ကာယလုပ်သား မဟုတ်ဘဲ စီမံခန့်ခွဲရေးရာထူးနဲ့ ခန့်ထားပြီး လုပ်ငန်းခွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရလို့ လက်ပြတ်တာမျိုး၊ စက်ညှပ်တာမျိုးတွေ ကြုံရတဲ့ အခါမှာ အလုပ်ရှင်အချို့ဟာ လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်နစ်နာကြေးမလျှောက်ပေးဘဲ ဆေးကုပြီးတဲ့အခါ အလုပ်ကနေ ထုတ်ပယ်ခံရသူတွေလည်း တွေ့ဖူးပါတယ်။
လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်နစ်နာကြေးလျှောက်တဲ့အခါမှာ မိမိရာထူး တာဝန် နေ့စဉ်အလုပ်တွေနဲ့ ခန့်ထားစဉ်က အမ်အိုအမ်ကို EP လျှောက်ထားတာနဲ့ ကွဲလွဲနေလို့ ထိခိုက်နစ်နာကြေးမတင်ရဲသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါတွေကတော့ မိမိ ရပိုင်ခွင့် ဆုံးရှုံးရတာပါဘဲ။ EP နဲ့ S Pass တွေကို ခန့်တဲ့ ရာထူးနဲ့ အမှန်တစ်ကယ် ခိုင်းတဲ့ အလုပ်ကွာခြားချက်ရှိတဲ့အထဲမှာ EP အလုပ်ကို ပိုပြီး ဆိုးရွားပါတယ်။ S Pass သမားတွေကတော့ကာယအလုပ်သမားအလုပ် ဝင်လုပ်ရင်း ထိခိုက်ဖဒဏ်ရာ ရတဲ့အခါမှာ အချို့တွေက ကျွမ်းကျင် ဝန်ထမ်းအဆင့်ဖြစ်နေတာမို့ EP ထက်စာရင် လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်နစ်နာကြေးလျှောက်ရာမှာ အခက်အခဲ မရှိလှပါဘူး။
နောက်ထပ် အခက်အခဲကတော့ အမ်အိုအမ်မှာ ပတ်စ်တင်တုန်းက ဖော်ပြတဲ့ လစာနဲ့ အမှန်တစ်ကယ်ရတဲ့ လစာ ကွာနေတာပါဘဲ။ ဒါတွေက အလုပ်ရှင်နဲ့ ၂ ဦး သဘောတူ ရှင်းနေကြဆဲပါ။ ဒါပေမယ့် မတရားသဖြင့် အလုပ်ကနေ ထုတ်လိုက်တာမျိုး၊ လစာ မရလို့ အမ်အိုအမ် တိုင်ဖို့ ဆိုင်းပြင်တဲ့အခါမျိုးမှာ အချို့သူတွေအတွက် တိုင်ဖို့ နောက်ဆုတ်သွားတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ လစာမမှန်သလို အလုပ်ရာထူးကလည်း မမှန်တော့ ဒါတွေအတွက် အရဲစွန့်ဖို့လည်း လိုသေးတာကို။ အမ်အိုအမ် မသိလောက်ပါဘူးဆိုပြီး တိုင်ခဲ့သူတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ ဘယ်လို ဘယ်ပုံနဲ့ အဆုံးသတ်သလဲဆိုတာတော့ မသိပါ။ ဒါကလည်း အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးမှု တစ်ရပ်ပါ။
ဒီလိုဖြစ်ရပ်တွေထဲမှာ လစာတွေ ရတာထက် ပိုပြီးဖော်ပြထားတဲ့အတွက် လစာ ဝင်ငွေခွန်အတွက် ကိုယ်မရတဲ့ လစာပေါ်မူတည်ပြီး အခွန်တွေဆောင်ရတဲ့ ပြဿနာပါဘဲ။ S Pass သမားတွေမှာ ဒီလိုပြဿနာ မရှိသလောက်နည်းပေမယ့် EP သမားတွေထဲမှာ အခွန်တွေ အဆမတန်ဆောင်နေရသူတွေ ဒုနဲ့ ဒေးပါ။ အချို့အလုပ်ရှင်တွေကတော့ သူတို့ဘက်ကနေ အခွန်ဆောင်ပေးတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အကယ်၍ မဆောင်ပေးခဲ့ရင် ဘာလုပ်မလဲ။ ဒါကလည်း အလုပ်ရှင်နဲ့ ကိုယ် ယှဉ်တဲ့အခါမှာ သူဘက်က ဒဏ်ငွေနဲ့ ပြီးသွားနိုင်ပေမယ့် ကိုယ်ဘက်က နောင်မှာ စင်ကာပူမှာ အလုပ်လုပ်ခွင့် မရနိုင်လောက်တဲ့အထိ ကြုံတွေ့ရနိုင်မယ်ဆိုတာကို ပတ်ဝန်းကျင်မှ ကြားသိနေရတဲ့ သတင်းများမှ မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
Ref: tin min FB:https://www.facebook.com/100006009099605/posts/1099687596908200?s=100006603304750&v=i&sfns=mo
Posted by Ko Nge at Wednesday, May 08, 2019 No comments:
Labels: ဗဟုသုတ, မူခင်း, အလုပ်အကိုင်
UB103 ရန်ကုန်- မန္တလေး- ရန်ကုန် ခရီးစဉ်ကို UB 103 M...
April 2019 မှာ IMF ကထုတ်ပြန် တဲ့မြန်မာ့ စီးပွားရေး...
ရာသီဥတုပူပြင်းတဲ့အချိန်မှာ သတိထားသင့်တဲ့ မျက်စိနာေ...
ဘဏ်မှာ ချေးငွေရဖို့လုပ်ငန်းရှင်တချို့ ပုံစံမျိုးစု...
စင်ကာပူကုမ္ပဏီက နေပြည်တော်တွင် တစ်နှစ်တန် ငါးသောင်း...
Biman ရန်ကုန်ကွင်းမှာ လေယာဉ် overruns ဖြစ်...
ဘဏ္ဍာနှစ်သုံးနှစ်အတွင်း ကျပ် ၁၈ ဘီလျံကျော် အရှုံးပေါ်ခ...
မြန်မာတွေ အမြက်ကျယ်ကျယ်ဖွင့် တိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံတေ...
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း ဂျပန်တို့ကျူးလွန်ခဲ့သော စစ်ရာဇ...
နှစ်​​ပေါင်း ၅၀ အတွင်းရခိုင်​ပြည်​နယ်​ကို အရယူရန...
စင်္ကာပူ Information Technology လုပ်ငန်း မန်နေဂျာဟော...
စင်ကာပူသံရုံးနှင့် မြန်မာအစိုးရတို့ ပူးပေါင်းပြီး ...
ADB-JSP Scholarship at Graduate School of Management, Kyoto University